English | Hla Hla Htay's Notes
English-Myanmar Translation Collection5May 12, 2018
Filed under: English,Myanmar — hhh123 @ 7:36 am
Tags: Democratic, English, IDEA, Myanmar, Terms, Translation
English-Myanmar Glossary of Democratic Terms
ACE ###ရွေးကောက်ပွဲ အချက် အလက် ကွန်ယက်
Aggregation### စုစည်းခြင်း၊ စုရုံးခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း
Asian Human Rights Charter### အာရှလူ့အခွင့်အရေး ပြန်တမ်း
Assimilation###ယဉ်ကျေးမှုနေထိုင် ဓလေ့တစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ တဖြေးဖြေး ပြောင်းလဲသွားခြင်း
Audit (electoral)### စစ်ဆေးခြင်း (ရွေးကောက်ပွဲ)
Audit trail### ရွေးကောက်ပွဲ စာရွက်စာတမ်းများကို မှတ်သားထားခြင်း
Autonomy### ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်
Average district magnitude### မဲဆန္ဒနယ် ပျှမ်းမျှ ကိုယ်စားလှယ်ပမာဏ
Balanced representation### အချိုးမျှ ကိုယ်စားပြုစေခြင်း
Bicameral legislature### လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ဖြင့် ဥပဒေပြဌာန်းမှုပုံစံ
Bill of Rights### ပြည်သူ့အခြေခံ အခွင့်အရေးများ ဥပဒေ
Binding referendum### လိုက်နာရမည့် ဆန္ဒခံယူပွဲ
Blocking Minority### ဗီတိုအာဏာရ လူနည်းစု။
Block Vote### ဘလောက်မဲ/ တလုံး တခဲတည်း မဲအုပ်စု
Borda Count###ကိုယ်စားလှယ်လောင်း များကို အမှတ်စဉ် တပ်၍ မဲပေးခြင်း
Boundary delimitation### မဲဆန္ဒနယ်ခွဲဝေ သတ်မှတ်ခြင်း
Calendar (electoral)### ရွေးကောက်ပွဲ ပြက္ခဒိန်
Campaign (electoral)### မဲဆွယ်ခြင်း (ရွေးကောက်ပွဲ)
Campaign period### မဲဆွယ်ကာလ
Capacity building### စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်း
Citizen assessment of democracy### နိုင်ငံသားများက ဒီမိုကရေစီကို အကဲဖြတ်ခြင်း။
Civic education### နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးများ အကြောင်း ပညာပေး ခြင်း (ပြည်သူ့နီတိ)
Civic nationalism### နိုင်ငံသားအခြေပြု အမျိုးသားရေးဝါဒ
Civil liberties### နိုင်ငံသားများ၏ (ပဋိဥာဉ်) လွတ်လပ်ခွင့်/ မွေးရာပါလွပ်လပ်ခွင့်။
Civil registry### နိုင်ငံသား မှတ်တမ်း
Civil society### အရပ်ဖက် လူ့အဖွဲ့အစည်း
Civil society dialogue### အရပ်ဖက် လူ့အဖွဲ့ အစည်းနှင့် တိုင်ပင် ညှိနှိုင်းခြင်း
Civil society group### အရပ်ဖက် လူ့အဖွဲ့အစည်းအုပ်စု
Civil society organization### အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်း
Claims (electoral)### စောဒကများ (ရွေး ကောက်ပွဲဆိုင်ရာ)
Closed List### ကိုယ်စားလှယ် စာရင်းပိတ်စနစ်
Code of conduct (electoral)### လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ် (ရွေး ကောက်ပွဲဆိုင်ရာ)
Collation of results### ရလဒ်များ ပေါင်းစည်းခြင်း
Collective action### စုစည်းလုပ်ကိုင်မှု
Collective rights### အစုအပေါင်း သဘောဆောင်သော ရပိုင်ခွင့်များ
Communal violence### ရပ်ရွာအသိုက်အဝန်း အလိုက် ကြမ်းရမ်းမှု
Community of interest### ဘုံဆန္ဒတူအုပ်စု
Compensatory seats### ထပ်ဖြည့်ပေးသည့် အမတ်နေရာများ
Competitive democracy### ယှဉ်ပြိုင်ရသော ဒီမိုကရေစီစနစ်
Competitive election### ယှဉ်ပြိုင်ရသော ရွေးကောက်ပွဲ
Concurrent powers### တပြိုင်နက်တည်း ကျင့်သုံးနိုင်သော အာဏာများ
Conditional grants### ကန့်သတ်ချက် ရှိသော ရန်ပုံငွေ
Conflict management### ပဋိပက္ခ စီမံခန့်ခွဲမှု
Conflict of interest### အကျိုးစီးပွား ၀ိရောဓိ
Conflict prevention### ပဋိပက္ခ ကာကွယ်ခြင်း
Conflict resolution### ပဋိပက္ခဖြေရှင်းခြင်း
Conflict transformation### ပဋိပက္ခ အသွင်ပြောင်းခြင်း
Consensual democracy### သဘောတူညီမှု အခြေခံသော ဒီမိုကရေစီ
Consensus building### သဘောမျှမှု တည်ဆောက်ခြင်း
Consociational democracy### သဘောမျှမှု ညှိနှိုင်းဒီမိုကရေစီ
Consolidated Fund### သီးသန့်လျာထားသော ရန်ပုံငွေ
Constituent Assembly### ဥပဒေပြု လွှတ်တော်
Constitution### ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ
Constitution building### ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ရေးဆွဲခြင်း
Constitutional### ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ နှင့်လျော်ညီသော
Constitutional amendment### ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက်
Constitutional body### ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်း သော အဖွဲ့အစည်း
Constitutional change### ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြောင်းလဲခြင်း
Constitutional convention### ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ညီလာခံ
Constitutional Council### ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကောင်စီ
Constitutional Court### ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေတရားရုံး (သို့) ခုံရုံး
Constitutional entrenchment of fundamental rights### အခြေခံအခွင့်အရေး များကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေတွင်ထည့်သွင်း ခြင်း
Constitutional order### ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာ စနစ်
Constitutional process### ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအရလုပ်ငန်းစဉ်
Constitutional reform### ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြုပြင် ပြောင်းလဲခြင်း
Constitutionalism### ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ကိုလိုက်နာသော ဝါဒ
Constitutionality### ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနှင့် လျော်ညီခြင်း
Consultative referendum### ဥပဒေအရလိုက်နာ ရန်မလိုသော ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲ
Contiguous district### ဆက်စပ်နေသော မဲဆန္ဒနယ်
Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW)### အမျိုးသမီးများအား နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခွဲခြားမှုပပျောက်ရေး ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း
Convention on the Rights of the Child### ကလေးအခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း
Convention relating to the Status of Refugees### ဒုက္ခသည်များ၏ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း
Corrupt practice### ရွေးကောက်ပွဲ အဂတိလိုက်စားမှု
Crimes against humanity### လူသားအားလုံးကို စော်ကားထိခိုက်စေ သော ရာဇ၀တ်မှုများ
Critical mass### အရေးပါသော လူအရေအတွက်
Cross-cutting cleavages### အလွှာစုံဖြတ် သဘောကွဲလွဲမှု
Cross-cutting themes### အလွှာစုံအကျုံးဝင်သော အကြောင်းအရာများ
Cultural rights### ယဉ်ကျေးမှု အခွင့်အရေးများ
Culture of democracy### ဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှု (ဝါ) အပြုအမူ (ဝါ) အလေ့အကျင့်
Culture of impunity### ဥပဒေချိုးဖောက်မှု မျက်ကွယ်ပြုဓလေ့
Customary law### ကျင့်ထုံးဥပဒေ
D’Hondt Formula### ဒီဟွန့် ဖေါ်မြူလာ
Decentralization### ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျှော့ချခြင်း
Deconcentration### အောက်ခြေအထိ လုပ်ပိုင်ခွင့်ချပေးခြင်း
Delegated jurisdiction and responsibilities### အောက်ခြေသို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခြင်း
Delegated legislation### ဥပဒေပြုခွင့် လွဲပေးခြင်း
Delegated powers### ထပ်ဆင့်ခွဲဝေပေးထား သော အာဏာများ
Democratic consolidation### ဒီမိုကရေစီ ကြံ့ခိုင်လာခြင်း
Democratic development### ဒီမိုကရေစီ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှု
Democratic governance### ဒီမိုကရေစီနည်းကျ အုပ်ချုပ်မှု
Democratic institutions### ဒီမိုကရေစီ အဆောက်အအုံများ
Democratic legitimacy### အစိုးရအာဏာနှင့် ပေါ်လစီများကိုအများ ပြည်သူမှလက်ခံမှု
Democratic oversight### ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ကွပ်ကဲမှု
Democratic process### ဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်
Democratic reform### ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု
Democratic transition### ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းခြင်း
Development assistance### ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီ
Development cooperation### ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု
Direct democracy### တိုက်ရိုက်ဒီမိုကရေစီ
Direct democracy instrument### တိုက်ရိုက်ဒီမိုကရေစီ ကျင့်သုံးစေသောစနစ်
Direct election### တိုက်ရိုက် ရွေးကောက်ခြင်း
Disadvantaged group### အနှိမ်ခံအုပ်စု/ အခွင့် အလမ်းနည်း အုပ်စု
Disarmament, demobilization and reintegration### လက်နက်ဖျက်သ်ိမ်း ခြင်း၊ တပ်ရုပ်သိမ်းခြင်း နှင့်ပြန်လည်ပေါင်း စည်းခြင်း
Distribution of preferences### ကြိုက်မဲများကို ခွဲဝေခြင်း
District magnitude### မဲဆန္ဒနယ်ရှိ ကိုယ်စားလှယ် လောင်း ပမာဏ
Districting### မဲဆန္ဒနယ် သတ်မှတ်ခြင်း
Domestic observers### ပြည်တွင်း ရွေး ကောက်ပွဲလေ့လာ အကဲခတ်သူများ
Dominant-party system### ပါတီတစ်ခုတည်း လွှမ်းမိုးသောစနစ်
Double majority### နှစ်ထပ်ကွမ်း အများစုမဲလိုအပ်ချက်
Due process### အစိုးရအနေဖြင့် ပြည်သူ့အခွင့်အရေး ပြဌာန်း ဥပဒေများကို လိုက်နာလေးစားခြင်း
Economic rights### စီးပွားရေး ရပိုင်ခွင့်များ
Election expenses### ရွေးကောက်ပွဲ ကုန်ကျ စရိတ်များ (ပါတီတစ်ခု (သို့) အမတ်လောင်း တစ်ဦး၏)
Election petition### ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ တိုင်လျှောက်ချက်
Election precincts### ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်မှုနယ်နိမိတ်
Electoral assistance### ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အကူအညီပေးမှု
Electoral authority### ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိအဖွဲ့
Electoral calendar### ရွေးကောက်ပွဲ ပြက္ခဒိန်
Electoral campaign/period### ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ် အချိန်ကာလ၊ ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ် စည်းရုံးမှု
Electoral code### ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ
Electoral Commission### ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်
Electoral Commissioner### ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်
Electoral contestants### ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ပြိုင်သူပါတီများ
Electoral costs### ရွေးကောက်ပွဲ ကုန်ကျစရိတ်များ
Electoral court### ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ခုံရုံး/တရားရုံး
Electoral cycle### ရွေးကောက်ပွဲ စက်ဝန်း
Electoral dispute### ရွေးကောက်ပွဲ အငြင်းပွားမှု
Electoral dispute resolution### ရွေးကောက်ပွဲ အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းခြင်း
Electoral district### မဲဆန္ဒနယ်
Electoral education### ရွေးကောက်ပွဲ အသိပညာပေး လုပ်ငန်း
Electoral formula### အမတ်နေရာ တွက် ချက်သော ပုံသေနည်း
Electoral gender quotas### ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ကျား၊မ ခွဲတမ်း
Electoral information### ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်
Electoral irregularity### ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ချွတ်ချော်မှားယွင်းမှု
Electoral management### ရွေးကောက်ပွဲ စီမံခန့်ခွဲမှု
Electoral Management Body### ရွေးကောက်ပွဲ စီမံ ခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့အစည်း
Electoral manipulation### ရွေးကောက်ပွဲအား ဝင်ရောက်စွက်ဖက် ချယ်လှယ်ခြင်း
Electoral materials### ရွေးကောက်ပွဲ ပစ္စည်းများ
Electoral modernization### ရွေးကောက်ပွဲခေတ်မှီ ရေး လုပ်ငန်းစဉ်
Electoral monitor### ရွေးကောက်ပွဲစောင့် ကြည့်ထိန်းကျောင်း ရန် တာဝန်ရှိသူ
Electoral monitoring### ရွေးကောက်ပွဲ စောင့် ကြည့်ထိန်းကျောင်း ခြင်း
Electoral observation### ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်ကဲခတ်ခြင်း
Electoral official### ရွေးကောက်ပွဲအရာရှိ
Electoral operations### ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှု လုပ်ငန်းများ
Electoral politics### ရွေးကောက်ပွဲဝင် နိုင်ငံရေး
Electoral procedures### ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ
Electoral process### ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်များ
Electoral programme### ရွေးကောက်ပွဲ အစီအစဉ်
Electoral quota### ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ခွဲတမ်းအမျိုးမျိုး
Electoral reform### ရွေးကောက်ပွဲ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု
Electoral register### ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း
Electoral registration### ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆန္ဒရှင် စာရင်းသွင်းခြင်း
Electoral regulations### ရွေးကောက်ပွဲ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ
Federacy### ဖက်ဒရယ် အစီအစဉ်
Federal Constitutional Court### ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတရားရုံး
Federal election### ပြည်ထောင်စု/တိုင်း နှင့် ပြည်နယ်အဆင့် ရွေးကောက်ပွဲ
Federal government### ပြည်ထောင်စုအစိုးရ
Federal loyalty### ပြည်ထောင်စုအပေါ် သစ္စာရှိခြင်း
Federal system### ပြည်ထောင်စု စနစ်
Federalism by disaggregation### ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသများ ဖေါ်ဆောင်ကာ ပြည်ထောင်စု ဖန်တီးခြင်း
First Past The Post### မဲများသူနိုင်စနစ်/ မဲများသူအကုန်ယူ စနစ်/မဲများသူ အနိုင်ယူစနစ်
First preference### အကြိုက်ဆုံး ရွေးချယ်ခြင်း
Fiscal constitution### ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ပိုင်ခွင့် ဖွဲ့စည်းပုံ
Form of government### အစိုးရစနစ်
Free and fair elections### လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ
Free List### စိတ်ကြိုက်ဆန္ဒပြု နိုင်သောစနစ်
Freedom from fear### ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှ ကင်းဝေးရေး
Freedom of expression### လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖေါ်ခွင့်
Freedom of religion### လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်
Freedom of speech### လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆို ဝေဖန်ခွင့်
Fundamental rights### အခြေခံ အခွင့်အရေးများ
Gender analysis### ကျား၊မ လိင်မတူ ကွဲပြားမှု အခြေပြု လူမှုဘ၀ ဆန်းစစ် လေ့လာချက်
Gender balance### ကျား၊မ အချိုးညီခြင်း
Gender equality### ကျား၊မ တန်းတူညီမျှမှု
Gender equity### ကျား၊မ သာတူညီမျှမှု
Gender mainstreaming### ကျားမမတူကွဲပြားမှု အမြင်နှင့်တန်းတူ ရရှိ စေရေးမူတို့ကို လုပ် ဆောင်မှုတိုင်းတွင် ထည့်သွင်းပါဝင်စေခြင်း။
Gender parity### ကျား၊မ တန်းတူညီမျှမှု
Gender quota### ကျား၊မ ခွဲတမ်း
Gender quota provisions### ကျား၊မ ခွဲတမ်း ပြဋ္ဌာန်း ချက်များ
General election### အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ
Gerrymandering### မဲဆန္ဒနယ်အား မသမာရည်ရွယ်ချက် ဖြင့်ရေးဆွဲသက်မှတ်မှု
Glass ceiling### မမြင်နိုင်သော အတားအဆီးများ
Good governance### ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေး
Governing party### အာဏာရပါတီ
Group rights### အုပ်စုလိုက် အခွင့်အရေးများ
Healing and reconciliation### ကြေရာကြေကြောင်း နှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ် စေခြင်း
Homogeneous district### လူမျိုး၊ဘာသာ၊ စကား၊ ယုံကြည်မှုတူရာ မဲဆန္ဒ ရှင်များစုစည်းနေသော မဲဆန္ဒနယ်
Horizontal accountability### တပြေးညီ တာဝန်ခံမှု
Human rights### လူ့အခွင့်အရေးများ
Human rights violations### လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုများ
Human security### လူမှုဘ၀လုံခြုံရေး
Hung parliament### သရေပွဲပါလီမန်
Immunity### ဥပဒေအရ အရေးယူ ခံရခြင်းမှလွတ်နေခြင်း
Indigenous intellectual property rights### ဌာနေတိုင်းရင်းသား များ/မူလဒေသခံများ၏ ဥာဏပစ္စည်း အခွင့်အရေးများ
Indigenous people### ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများ
Individual rights### လူတစ်ဦးချင်း၏ အခွင့်အရေးများ
Largest Remainder Method### အများဆုံးကြွင်းကျန် မဲပေါ်မူတည်၍ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ခွဲဝေပေးသော စနစ်
Legal framework (electoral)### ဥပဒေစည်းမျဉ်း (ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ)
Legal system### ဥပဒေစနစ်
Legality check### ဥပဒေနှင့် ညီ၊မညီ ဆန်းစစ်ခြင်း
Legislated gender quota### ပြဌာန်းထားသော ကျားမခွဲတမ်း ကိုတာ
Legislated quota### ပြဋ္ဌာန်းထားသော ကိုတာ
Legislative amendment (electoral)### ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်
Legislative assembly### ဥပဒေပြုလွှတ်တော်
Legislative framework### ဥပဒေပြုဘောင်
Legislative oversight### ဥပဒေပြုခြင်းကို ကြီးကြပ်ခြင်း
Legislative recall### အမတ်ရာထူး ရုတ်သိမ်းခြင်း
Legislative scheme### ဥပဒေပြုနည်းလမ်း
Legislature### ဥပဒေပြုအဖွဲ့ (လွှတ်တော်)
Legitimate government### တရားဝင်အစိုးရ
Level playing field### အားလုံးတပြေးညီ ယှဉ်ပြိုင်နေခြင်း
Liberal democracy### လစ်ဘရယ်ဒီမုကိ ရေစီ (သဘောထားကြီး ဒီမို ကရေစီ၊ လူနည်းစု ငဲ့ညာ ဒီမိုကရေစီ)
Liberties/freedoms### လွတ်လပ်မှုများ၊ လွတ်လပ်ခွင့်များ
List Proportional Representation### စာရင်းပြအချိုးနှင့် ကိုယ်စားပြုသောစနစ်
List system### စာရင်းစနစ်
Local democracy### ဒေသန္တရဒီမိုကရေစီ
Local government### ဒေသန္တရအစိုးရ
Local selfgovernment### ဒေသန္တရ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး
Lower House### အောက်လွှတ်တော်
Majoritarian### အများစုဖော်ဆောင် စနစ်
Majoritarianism### လူအများစုက အရာ အားလုံးကို ဆုံးဖြတ် နိုင်သည့် အယူဝါဒ၊ “အများစုအမြဲမှန်ဝါဒ”
Majority community### လူများစု အသိုက်အ၀န်း
Majority rule### အများစုဆန္ဒဖြင့် အုပ်ချုပ်သောစနစ်
Majority system### အများစုစနစ်
Majority absolute### ထက်ဝက်ကျော် အများစု
Majority-rule systems### အများစုက အုပ်ချုပ်သောစနစ်များ
Malapportionment### မဲဆန္ဒရှင်ပြန့်နှံ့မှု မညီမျှခြင်း
Marginal constituencies### အရှုံးအနိုင်ကွာဟမှု နည်းသော မဲဆန္ဒနယ်များ
Marginalized groups### ဘေးဖယ်ခံအုပ်စုများ
Minority community### လူနည်းစု အသိုက်အဝန်း
Minority rights### လူနည်းစု အခွင့်အရေး
Mixed electoral system### ရောစပ်ရွေးကောက်ပွဲ စနစ်
Mixed Member Proportional (MMP) electoral system### ရောစပ်အချိုးကျ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်
Mixed system### အရောစနစ်
Mobile voting### ရွေ့လျားမဲရုံဖြင့် မဲပေးခြင်း
Mock election### အစမ်းရွေးကောက်ပွဲ
Monitor### စောင့်ကြည့် ထိန်းကြောင်းသည်
Monitoring### စောင့်ကြည့် ထိန်းကြောင်းမှု
Monitoring and evaluation### စောင့်ကြည့် ထိန်းကြောင်းမှုနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း
Multiculturalism### ဗဟုယဉ်ကျေးမှု/ ယဉ်ကျေးမှုစုံ
Multi-member district### တစ်ဦးထက်ပိုသော အမတ်များရွေးချယ် ခွင့် ရှိသောမဲဆန္ဒနယ်
Multinational state### လူမျိုးစုံသောနိုင်ငံ
Multiparty competition### ပါတီစုံယှဉ်ပြိုင်ခြင်း
Multiparty democracy### ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ
Multiparty election### ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲ
Multiparty politics### ပါတီစုံနိုင်ငံရေး
Multiparty system### ပါတီစုံစနစ်
Multiple-tier system### အလွှာစုံစနစ်
National ownership### အစိုးရ၏ ဆုံးဖြတ်လုပ်ပိုင်ခွင့်
Native community### ပင်ရင်းလူမျိုးစု အသိုက်အ၀န်း
Natural resources### သဘာဝ သယံဇာတများ
Naturalized citizenship### နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရပြီးသူ
Non-territorial federalism### နယ်မြေကို အခြေမပြုသော ပြည်ထောင်စုဝါဒ
Observers### လေ့လာ အကဲခတ်သူများ
Official mark### ရုံးတံဆိပ်
Official results### တရားဝင်ရလဒ်များ
One Person One Vote One Value (OPOVOV)### လူတစ်ဦး မဲတပြား တန်ဖိုးတစ်ခု
Open List### ကိုယ်စားလှယ် စာရင်းဖွင့်စနစ်
Opinion poll### သဘောထားစစ်တမ်း
Opposition### အတိုက်အခံ/ အတိုက်အခံပြုခြင်း
Optional referendum### ဥပဒေကြောင်းအရ တောင်းဆိုမှုကြောင့် ကျင်းပရသော ဆန္ဒခံယူပွဲ
Ordinal ballot### ကိန်းဂဏန်းဖြင့် ပြသောမဲပေးနည်း
Parallel System### စနစ်နှစ်မျိုး အပြိုင် ကျင့်သုံးသောစနစ်
Paris Charter foraNew Europe### ဥရောပအသစ် အတွက် ပါရီကြေညာ စာတမ်း
Paris Minimum Standards### ပါရီ အနည်းဆုံး စံနှုန်းများ
Parliament### ပါလီမန် (ဝါ) လွှတ်တော်
Parliamentary sovereignty### ပါလီမန်(ဝါ)လွှတ်တော် မှအချုပ်အခြာအာဏာ အပြည့်အ၀ ရှိခြင်း
Parliamentary system### ပါလီမန်(ဝါ) လွှတ်တော်စနစ်
Participatory democracy### အားလုံးပါဝင်သော ဒီမိုကရေစီ
Participatory process### လူတိုင်းပါဝင် ဆုံးဖြတ် နိုင်သော လုပ်ငန်းစဉ်
Partisan organization### ဘက်လိုက်သော အဖွဲ့အစည်း
Party agent### ပါတီဝန်ထမ်း
Party Block Vote### မဲအများဆုံးရပါတီမှ အနိုင်ရစနစ်
Peace process### ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်
Peace settlement### ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီချက်ရမှု
Peacebuilding### ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ခြင်း
Peacekeeping operation### ငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်း
Plural society### ဗဟုလူ့အဖွဲ့အစည်း
Pluralistic values### ဗဟုတန်ဖိုးများ
Plurality of votes### အများဆုံးမဲရရှိခြင်း
Plurality/Majority Systems### ဗဟု/အများစုစနစ်များ
Plurinational identities### နိုင်ငံသား သရုပ်များစွာရှိခြင်း
Plurinational state### နိုင်ငံသားသရုပ်များစွာ ရှိသောနိုင်ငံ
Political accountability### နိုင်ငံရေးအရ တာဝန်ခံမှု
Political accountability cycle### နိုင်ငံရေးအရရှင်းလင်း ပြရန်တာဝန်ရှိခြင်း စက်ဝိုင်း
Political bargaining### နိုင်ငံရေးအပေးအယူ
Political contribution### နိုင်ငံရေး အထောက်အပံ့
Political culture### နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှု
Political equality### နိုင်ငံရေးအရ တန်းတူညီမျှမှု
Political finance### ပါတီဘဏ္ဍာရေး ထောက်ပံ့မှုစနစ်
Political freedom### နိုင်ငံရေးလွတ်လပ်ခွင့်
Political liberalization### နိုင်ငံရေး ဖြေလျှော့ပေးခြင်း
Political participation### နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်ဆင်နွဲမှု
Political rights### နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးများ
Polling areas### မဲပေးရန်နေရာ
Polling booth### ဆန္ဒပြုခန်း
Polling centre### မဲရုံ
Polling district### မဲဆန္ဒနယ်
Polling official### မဲရုံမှုး
Polling period### မဲပေးချိန်ကာလ
Polling place### မဲရုံ
Polling site### မဲရုံ
Polling station### မဲရုံ
Popular participation### လူထုက ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း
Popular vote### လူထုတစ်ရပ်လုံး၏ မဲ
Positive discrimination### အနှိမ်ခံခဲ့ရသော အုပ်စုများအား အထူးအခွင့်အရေး ပေးလျော်ခြင်း
Preferential distribution### ဦးစားပေးခွဲဝေခြင်း
Preferential voting system### နှစ်သက်ရာ အသား ပေး မဲပေးခြင်းစနစ်
Prescribed by law### ဥပဒေက ပြဌာန်းထားသော
Promulgate### စတင်အာဏာ သက်ရောက်စေသည်
Proportional electoral system### အချိုးကျမဲခွဲသော စနစ်
Proportional Representation### အချိုးကျ ကိုယ်စားလှယ် ရွေးကောက်ခြင်း
Protection of minorities### လူနည်းစုများကို ကာကွယ်ခြင်း
Province/provincial### ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး
Provincial equality### ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီးများ၏ တန်းတူညီမျှမှု
Qualified majority### အများစုမဲ စနစ်မျိုးကို သတ်မှတ်ခြင်း
Quick count results### အမြန်တွက်၍ရသော ရလဒ်များ
Quorum### အနည်းဆုံး လိုအပ်သည့်ဦးရေ
Quota (parliamentary)### ခွဲတမ်း (လွှတ်တော်)
Race### လူမျိုး Ratification### ဥပဒေတစ်ခုကို အတည်ပြုခြင်း
Reapportionment### မဲဆန္ဒနယ်များ ပြန်လည် သတ်မှတ်ခြင်း
Redistribution### မဲဆန္ဒနယ်များ ပြန်လည် သတ်မှတ်ခြင်း
Redistricting### မဲဆန္ဒနယ်မြေပြင်ဆင် သတ်မှတ်ခြင်း
Recall### တာဝန်မှပြန်လည် ရုတ်သိမ်းခြင်း
Reconciliation### ရင်ကြားစေ့ရေး (သို့) ပြန်လည်သင့်မြတ်ခြင်း
Recount### မဲများ ထပ်မံရေတွက်ခြင်း
Referendum### ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲ
Representative democracy### ကိုယ်စားပြုဒီမိုကရေစီ
Representative governement### ကိုယ်စားပြုအစိုးရ
Reserved powers### လူထုသာ ကျင့်သုံးခွင့် ရှိသော လုပ်ပိုင်ခွင့်/ အာဏာများ
Reserved seats### သီးသန့်ဖယ်ထားသော အမတ်နေရာများ
Residual powers### အကြွင်းအကျန် အာဏာများ
Resolution### ဆုံးဖြတ်ချက်/ ဖြေရှင်းချက်
Responsiveness### အလျင်အမြန် အရေးယူ ဆောင်ရွက်နိုင်မှု
Revenue sharing### ၀င်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲခြင်း
Rule of law### တရားဥပဒေစိုးမိုးခြင်း
Ruling party### အာဏာရပါတီ
Secular state### ဘာသာရေး မနွယ်သောနိုင်ငံတော်
Secularism### ဘာသာရေး မနွယ်သောဝါဒ
Semi-competitive elections### တစ်ပိုင်းတစ်စသာ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရှိသော ရွေးကောက်ပွဲ
Semi-direct democracy### တိုက်ရိုက် တစ်ပိုင်း တစ်စ ဒီမိုကရေစီ
Separation of powers### အာဏာခွဲဝေပိုင်းခြား ကန့်သတ်ထားခြင်း
Shared revenues### ဝင်ငွေခွဲဝေမှုစနစ်
Simple majority### ၅၀% အထက်ရရှိမှု
Single Non Transferable Vote### မဲလွှဲပြောင်းခြင်း မပြုနိုင်သောစနစ်
Single Transferable Vote### မဲလွှဲပြောင်း ပေးနိုင်သောစနစ်
Single-member constituency### ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး တည်းသာ ရွေးချယ် ခွင့်ရှိသော မဲဆန္ဒနယ်
Social contract### လူမှုပဋိညာဉ်
Soft power### သိမ်မွေ့ပါဝါ
Special autonomous area### ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ အထူးဒေသ
State### တိုင်းပြည်/ပြည်နယ်/ တိုင်းနိုင်ငံ
State of emergency### အရေးပေါ် အခြေအနေ
Statement of the vote### မဲအရေအတွက်ကို မှတ်သားထားသော စာရွက်
Subnational unit### ပြည်နယ်/တိုင်း
Subsidiarity### အနိမ့်ဆုံးအဆင့်ထိ အုပ်ချုပ်ခြင်း
Subordinate Electoral Management Body### ဖြည့်ဘက် ရွေးကောက်ပွဲ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့
Subsidiary Electoral Management Body### ဖြည့်ဘက် ရွေးကောက်ပွဲ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့
Suffrage### မဲပေးခွင့် Supranational institution### နိုင်ငံစုံအဖွဲ့အစည်း
Territorial autonomy### နယ်မြေပိုင်စိုးမှု
Territorial federalism### နယ်မြေကို အခြေပြု သော ပြည်ထောင်စုဝါဒ
Traditional justice### ရိုးရာအစဉ်အလာ တရားစီရင်ခြင်း
Transition to democracy### ဒီမိုကရေစီသို့ ကူးပြောင်းခြင်း
Transitional government### အသွင်ကူးပြောင်း ကာလအစိုးရ/ ကြားဖြတ်အစိုးရ
Transitional justice### အကူးအပြောင်းဆိုင်ရာ တရားမျှတမှု
Two-Round System (TRS)### နှစ်ကြော့ပြန် ရွေးကောက်ခံသော စနစ်
Unconstitutional### ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေနှင့် သွေဖည်သော
Unitary State### တစ်ပြည်ထောင်နိုင်ငံ
Universal Declaration of Human Rights### ကုလသမ္မဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကြေငြာစာတမ်း
Universal human rights### အကြွင်းမဲ့ လူ့အခွင့်အရေးများ
Universal suffrage### အကြွင်းမဲ့မဲပေးခွင့်
Upper House### အထက်လွှတ်တော်
Valid ballot### ခိုင်လုံမဲ
Valid vote### ခိုင်လုံသောဆန္ဒမဲ
Validity check### အတည်ဖြစ်၊မဖြစ်ကို ဆန်းစစ်ခြင်း
Verification### ဆန်းစစ် အတည်ပြုခြင်း
Verification of results### ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်များကို ဆန်းစစ်ခြင်း
Voter awareness### မဲဆန္ဒရှင် အသိပညာပေးခြင်း
Voter education### မဲဆန္ဒရှင် ပညာပေးလုပ်ငန်း
Voter information### မဲဆန္ဒရှင်များသို့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းအချက် အလက်ပေးခြင်း
Voter mobilization### မဲဆန္ဒရှင်မဲပေးအောင် စည်းရုံးခြင်း
Voting hours### မဲပေးချိန်
Women’s rights### အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး
Women’s human rights### အမျိုးသမီးတို့၏ လူ့အခွင့်အရေး
Women’s issues### အမျိုးသမီး အရေးကိစ္စများ
Women’s movement### အမျိုးသမီးအရေး လှုပ်ရှားမှု
Women’s quotas### အမျိုးသမီးများ အတွက်ခွဲတမ်း
Women’s representation### အမျိုးသမီးများ၏ ကိုယ်စားလှယ်ပြုမှု
Women’s underrepresentation### အမျိုးသမီး ကိုယ်စားပြုမှု နည်းလွန်းခြင်း
Xenophobia### နိုင်ငံခြားသား (ဝါ) လူစ်ိမ်းကို မုန်းတီး ကြောက်ရွံ့မှု
Zipper quota### ဇစ်ပါစနစ်
Zipper system### ဇစ်ပါစနစ်
English-Myanmar Translation Collection4May 8, 2018
Filed under: English,Language,Myanmar,Translation — hhh123 @ 5:13 am
Tags: English, GAD, Military, Myanmar, Rank, Translation
(၁) တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်	Commander in Chief of Defense Services
(၂) ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်	Deputy Commander in Chief of Defense Services
(၃) ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်	Commander in Chief (Army)
(၄) ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ရေ) Commander in Chief (Navy)
(၅) ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (လေ) Commander in Chief (Air)
(၆) စစ်ရေးချုပ် Adjutant General
(၇) စစ်ထောက်ချုပ် Quartermaster General
(၈) တပ်မတော်စစ်ဆေးရေး အရာရှိချုပ် Defense Services Inspector General
(၉ ) တပ်မတော်လေ့ကျင့်ရေး အရာရှိချုပ် Chief of Armed Forces Training
(၁ဝ) တပ်မတော် စစ်ဘက်ရေးရာ လုံခြုံရေး အရာရှိချုပ် Military Affairs Security (Chief)
(၁၁) စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ် (ကြည်း) Chief of Staff (Army)
(၁၂) စစ်ဦးစီး အရာရှိချုပ် (ရေ) Chief of Staff (Navy)
(၁၃) စစ်ဦးစီး အရာရှိချုပ် (လေ) Chief of Staff (Air)
(၁၄) စစ်ရာထူးခန့်ချုပ် Military Appointments General
(၁၅) စစ်ဥပဒေချုပ် Judge Advocate General
(၁၆) တွဲဖက်စစ်ရေးချုပ် Vice Adjutent General
(၁၇) တွဲဖက် စစ်ထောက်ချုပ် Vice Quartermaster General
(၁၈) တပ်မတော် တပ်ထိန်းချုပ် Provost Marshal
(၁၉ ) စစ်လက်နက်ပစ္စည်းညွှန်ကြားရေးမှူး Director of Ordinance
(၂ဝ) စစ်အင်ဂျင်နီယာ ညွှန်ကြားရေးမှူး Director of Military Enginerring
(၂၁) ဆေးဝန်ထမ်း ညွှန်ကြားရေးမှူး Director of Medical Services
(၂၂) ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး Director of Signal
(၂၃) ပစ္စည်းဝယ်ယူမှု ညွှန်ကြားရေးမှူး Director of Defense Services Procurment
(၂၄) ပြည်သူ့စစ်နှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်များ ညွှန်ကြားရေးမှူး Director of People Militias and Frontier Forces
(၂၅) ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး Director of People Relation and Psychological Welfare
(၂၆) ပြန်လည်နေရာချထားရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး Director of Resettlement
(၂၇) လေ့ကျင့်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး Director of Military Training
(၂၈) သံချပ်ကာယန္တရားတပ်ဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး Director of Armor
(၂၉ ) အမြောက်တပ်ဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး Director of Artillery
(၃ဝ) တိုင်းမှူး Command Commander
(၃၁) တပ်မမှူး Division Commander
(၃၂) စစ်ဗျူဟာမှူး Tectical Operation Command
(၃၃) လက်ထောက်စစ်ဥပဒေချုပ် Assistant Judge Advocate General
(၃၄) တပ်ရင်းမှူး Commanding Officer
(၃၅) ဒုတိယ တပ်ရင်းမှူး Second in Command
(၃၆) စစ်ဦးစီးအရာရှိ (ပထမတန်း) General Staff Officer Grade I
(၃၇) စစ်ဦးစီးအရာရှိ (ဒုတိယတန်း) General Staff Officer Grade II
(၃၈) စစ်ဦးစီးအရာရှိ (တတိယတန်း) General Staff Officer Grade III
(၃၉ ) တပ်ရေးဗိုလ်ကြီး Adjutant
(၄ဝ) တပ်ထောက်ဗိုလ်ကြီး Quarter Master
(၄၁)ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိ Intelligence Officer
(၄၂) ဆက်သွယ်ရေးအရာရှိ Signal Officer
(၄၃) ဆေးမှူး Medical Officer
(၄၄) ဆေးလက်ထောက် အရာခံဗိုလ် Medical Assistant
(၄၅) တပ်ရင်းတပ်ထောက် အရာခံဗိုလ် Regimental Quarter Master Sergeant
(၄၆) ရုံးအုပ်ကြီး Head Clerk
(၄၇) တပ်ကြပ်ကြီးစာရေး Sergeant Clerk
(၄၈) တပ်စာရင်းကိုင် Unit Accountant
(၄၉ ) ဗိုလ်လောင်း Cadet
(၅ဝ) အလုပ်သင်ဗိုလ် Apprentice
(၁) ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး Senior General
(၂) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး Vice Senior General
(၃) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး General
(၄) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Lieutenant General
(၅) ဗိုလ်ချုပ် Major General
(၆) ဗိုလ်မှူးချုပ် Brigadier General
(၇) ဗိုလ်မှူးကြီး Colonel
(၈) ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး Lieutenant Colonel
(၉ ) ဗိုလ်မှူး Major
(၁ဝ) ဗိုလ်ကြီး Captain
(၁၁) ဗိုလ် Lieutenant
(၁၂) ဒုတိယ ဗိုလ် Second Lieutenant
(၁၃) အရာခံ ဗိုလ် Warrant Officer I
(၁၄) ဒုတိယအရာခံ ဗိုလ် Warrant Officer II
(၁၅) တပ်ခွဲ တပ်ကြပ်ကြီး Quarter Master Sergeant
(၁၆) တပ်ကြပ်ကြီး Sergeant
(၁၇) တပ်ကြပ် Corporal
(၁၈) ဒုတပ်ကြပ် Lance Corporal
(၁၉ ) တပ်သား Private
Director General (DG)	ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
Permanent Secretary	အမြဲတန်းအတွင်းဝန်
Financial Commissioner	ဘဏ္ဍာတော်မင်းကြီး
Excise Commissioner	ယစ်မျိုးမင်းကြီး
Director General (DDG)	ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
Permanent Secretary	ဒုတိယအမြဲတန်းအတွင်းဝန်
State Administrator	ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
Regional Administrator တိုင်းဒေသကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး
Secretary of the State/Regional Government	ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး
District Administrator	ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
Deputy Commissioner (DC)	ဒုတိယကော်မရှင်နာမင်းကြီး
Secretary of the Leading Body of the Self-Administered Division	ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်းဦးစီးအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး
Deputy Director	ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး
Deputy District Administrator	ဒုတိယခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
Secretary of the Leading Body of the Self-Administered Zone	ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး
Assistant Director	လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး
Township Administrator	မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
Assistant Collector	လက်ထောက်ကော်လိတ္တော်အရာရှိ
Staff Officer (SO)	ဦးစီးအရာရှိ
Deputy Township Administrator	ဒုတိယမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
Deputy Staff Officer	ဒုတိယဦးစီးမှူး
Branch Clerk BC	ဌာနခွဲစာရေး
Upper Division Clerk UD	အကြီးတန်းစာရေး
Assistant Computer Specialist	လက်ထောက်ကွန်ပြူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး
Accountant level (3)	စာရင်းကိုင်(၃)
Upper Divisional Typist	အကြီးတန်းလက်နှိပ်စက်
Accountant level (4)	စာရင်းကိုင်(၄)
Lower Divisional Clerk (LD) အငယ်တန်းစာရေး
Ward/Villiage Tract staff	ရပ်/ကျေးစာရေး
Deputy Assistant Computer Specialist ဒုလက်ထောက်ကွန်ပြူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး
Lower Divisional Typist	အငယ်တန်းလက်နှိပ်စက်
Driver Grade (4)	ယာဉ်မောင်း(၄)
Driver Grade (5)	ယာဉ်မောင်း(၅)
Office helper/Office Staff	ရုံးအကူ
Case file holder	အမှုတွဲထိန်း
Guesthouse Watchman	ရိပ်သာစောင့်
English-Myanmar Translation Collection3April 20, 2018
Filed under: English,Myanmar,NLP — hhh123 @ 1:37 pm
Tags: Bilingual, English, Myanmar, Phrase, Translation
# Translation pairs collected from Ministry of Commence (http://www.commerce.gov.mm/)
#Regarding SME’s loan
cash flow ငွေသားစီးဆင်းမှုအခြေအနေ
working capital လှည့်ပတ်ရင်းနှီးငွေ
fixed capital ပုံသေရင်းနှီးငွေ
penalty fee ကတိပျက်ကြေး
default fee ပျက်ကွက်ကြေး
service charges ဝန်ဆောင်ခ
Credit Gurantee Insurance ချေးငွေအာမခံချက်
Joint Coordinating Body for Peace Process Funding JCB ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ရန်ပုံငွေဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့
NRPC Peace Fund အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုဌာန ငြိမ်းချမ်းရေးရန်ပုံငွေ
United Nation Conference on Trade and Development -UNCTAD ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုညီလာခံ
Manufactured and Semi-manufactured Products စက်မှုထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ
Agricultural Products လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ
Everything But Arms-EBA လက်နက်ခဲယမ်းမှအပ
Worker Rights အလုပ်သမားအခွင့်အရေး
Child Labor ကလေးအလုပ်သမား
Intellectual Property Rights – IPR ဉာဏပစ္စည်း မူပိုင်ခွင့်
Registered Exporter System-REX System ပို့ကုန်တင်ပို့သူများ မှတ်ပုံတင်သည့်စနစ်
European Commission ဥရောပကော်မရှင်
Self-Certification System ထုတ်လုပ်တင်ပို့သူကိုယ်တိုင် ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာသည့်စနစ်
(Bay of Bengal Initiative for Multi – Sectoral Technical and Economic Cooperation – BIMSTEC) ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ဒေသအတွင်း
ကဏ္ဍစုံနည်းပညာနှင့် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုမှုအစီအစဉ် – ဘင်းမ်စတက်
Cooperative Work Programme ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်း အစီအစဉ်
BIMSTEC – CCI Chamber of Commerical ?? ဘင်းမ်စတက်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း
Asia Development Bank ADB အာရှဖွံ့ဖြိုး‌ရေးဘဏ်
BIMSTEC-FTA Free Trade Areaဘင်းမ်စတက်လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဒေသ
the Working Group on the Rules of Origin (WG-RoO) ပင်ရင်းနိုင်ငံစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့
the Working Group on the Dispute Settlement Mechanism (WG-DSM) အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရေးယန္တရားဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့
Trans BIMSTEC Gas Pipeline Project နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းစီမံချက်
BIMSTEC Trans Power Exchange and Development Project နိုင်ငံဖြတ်ကျော်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရောင်းဝယ်ရေးစီမံချက်
Non-Conventional Source of Energy Project သမားရိုးကျမဟုတ်သော စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တို့ကို အသုံးချရေးစီမံချက်
Transport Infrastructure and Logistics Study –BTILS) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအဆောက်အဦနှင့် ထောက် ပံ့ရေးဆိုင်ရာ လေ့လာသုံးသပ်ချက်
သာမန် ငွေလွှဲစာတမ်း ဖွင့်လှစ်သည့် နည်းလမ်း (Normal LC)
အခမဲ့ တင်သွင်းခြင်း (FOC)
သွင်းကုန်ပါမစ် (Import Permit)
လက်ခစား စနစ် (Cutting Making Packaging – CMP) ၊
နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီး ဌာန (Direcotorate General of Foreign Trade- DGFT)
သွင်းကုန် တင်သွင်းခွင့် ဘီလ် လျှောက်ထားခြင်း (Bill of Entry)၊
အကောက်ခွန် စစ်ဆေး ရှင်းလင်းမှု ဆောင်ရွက်ခြင်း (Green Channel Facility)၊
အခွန်ပေးဆောင်ခြင်း (Payment of Duty)၊
ကုန်တင်လွှာ (Bill of Loading)
ကုန်စည်ထွက်ခွာခွင့် လက်မှတ် (Cargo Release Order)
ပင်ရင်းဒေသသက်သေခံလက်မှတ် (Certificate of Country Origin)
ကုန်ပို့လွှာ (Certificate of Country Origin)
သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာ (Import Decleration)
ထုပ်ပိုးမှု စာရင်း (Packing Lists)
ကျန်းမာရေးသက်သေခံလက်မှတ် (Health Certificate)
နှလုံးသွေးကြော ပုပ်ရောဂါ (Myocardial Infarction)
နှလုံးသွေး ကြောပိတ်ခြင်း (Coronary Artery Disease)
သွေးထဲရှိ အဆီဓါတ် (Cholesterol)
နှလုံးထိခိုက်ခြင်းရောဂါ ( Heart Attacks )
ကျန်းမာ သောနေထိုင် စားသောက်မှုပုံစံ (Healthy Life Style)
အခွန် မဟုတ်တဲ့ ကုန်သွယ်ရေး အတား အဆီး (NTB)
ကုန်သွယ်မှု လျင်မြန် ချောမွေ့စေရေး (Trade Facilitation)
သွင်းကုန် လိုင်စင် နဲ့ အကောက်ခွန်ကြေငြာလွှာ (ID)
အာဆီယံ စီးပွားရေး အသိုက် အဝန်း (ASEAN Economic Community)
ဦးစားပေး ကဏ္ဍကြီး (၁၁) ရပ် ( 11-priority sector)
တစ်ခု တည်းသော ဈေးကွက်နဲ့ ထုတ်လုပ်မှု အခြေခံ ဒေသ (Single Market & Production Base)
ကုန်စည်များ လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်းမှု (Free Flow of Goods)
Trade Mark အမှတ်တံဆိပ်
အေအီးစီလမ်းညွှန်မြေပုံ (AEC Blue print)
အရည်အသွေးမြင့်မားသည့် စိုက်ပျိုးထုတ်ကုန် (Quality Agro Product)
အရည်အချင်း အရည်အသွေး သတ်မှတ်ချက် (Specification)
အကောက်ခွန်လွတ်အရောင်းဆိုင် (Duty Free Shop)
အရှေ့အနောက် စီးပွားရေးစင်္ကြံ (EWEC)
ကျေးရွာတစ်ခုထုတ်ကုန်တစ်မျိုးစနစ် (OTOP- One Tambon One Village )
ကုန်စည်ဒိုင်အရောင်းအ၀ယ်ဈေးနှုန်း MARKET PRICE
ထိုင်းအမျိုးသား စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဘုတ် (NESDB)
ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး မောင်းနှင်အား (Growth of Engine)
ကုန်သွယ်မှု ဆိုင်ရာ ဖြေလျော့မှု (Trade Liberaliation)
တစ်ဦးတည်းပိုင် ထုတ်ကုန်/ သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင် ကဒ် (Individual Trading Card-ITC)
ကိုယ်စားလှယ် Special Power
မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ် Greater Mekong Sub-region Economic Cooperation Program (GMS)
ဆက်သွယ်၊ ယှက်နွယ်၊ ပေါင်းစည်းကြမယ် Three Cs
ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု (Connectivity) ပြိုင်ဆိုင်မှု (Competitiveness) နှင့် ပေါင်းစည်းမှု (Community)
လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး(Human Resources Development)
East – West Economic Corridor (အရှေ့ – အနောက် စီးပွားရေးစင်္ကြံ)
North – South Economic Corridor (တောင် – မြောက် စီးပွားရေးစင်္ကြံ)
Southern Economic Corridor (တောင်ပိုင်းစီးပွားရေး စင်္ကြံ)
Telecommunication Backbone (ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေး ပင်မကျောရိုး)
Regional Power Interconnection and Trading Arrangements (ဒေသတွင်း ဆက်သွယ်မှု စွမ်းအားနှင့် ကုန်သွယ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု)
Facilitating Cross – Border Trade, investment and Tourism နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ကုန်သွယ်ရေး၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းလျင်မြန်ချောမွေ့စေရေး)
Enhancing Private Sector Participation and Competitiveness (ပုဂ္ဂလိက ပါဝင်မှုနှင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုမြှင့်တင်ရေး)
Developing Human Resources and Skills Compe -tencies (လူသား အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များရရှိရေး) ။
Strategic Environment Framework (မဟာဗျူဟာဆိုင်ရာ သဘာဝဝန်းကျင် မူဘောင် )
Flood Control and Water Resources Management (ရေလွှမ်းမိုးထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ရေသယံဇာတ စီမံခန့်ခွဲရေး)
Mekong Tourism Development ( မဲခေါင်ခရီးသွားလာမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး )
Eastern Corridor Extension (အရှေ့ပိုင်း ထပ်တိုးစင်္ကြံ)
မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲ ကုန်စည်နှင့် လူများနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပို့ဆောင်မှု လွယ်ကူချောမွေ့စေရေးမူဘောင် သဘောတူစာချုပ် (Framework Agreement for
Facilitation of the Cross – Border Transport of Goods and People in the GMS- CBTA)
Southern Coastal Corridor (တောင်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းစင်္ကြံ)
Northeastern Corridor ( အရှေ့မြောက်ပိုင်းစင်္ကြံ)
North – South Corridor Extension (မြောက်- တောင် ထပ်တိုးစင်္ကြံ)
ASEAN Framework Agreement on the facilitation of goods in Transit -AFAGIT (အာဆီယံ နိုင်ငံဖြတ်သန်း ကုန်စည်များပို့ဆောင်ရာတွင်
လွယ်ကူချောမွေ့စေရေး မူဘောင်သဘော တူညီချက်)
ASEAN Framework Agreement on the facilitation of Inter-State Transport- AFAFIST (အာဆီယံနိုင်ငံ အချင်းချင်း ပို့ဆောင်ရေး
ASEAN Agreement on Mulimodal Transport (အာဆီယံ ဘက်စုံပို့ဆောင်ရေး သဘောတူညီချက်)
အန္တရာယ်ရှိသောကုန်ပစ္စည်းများသယ်ဆောင်ခြင်း (Carriage of Dangerous Goods)
နိုင်ငံတကာသွားလာမှုအတွက် မော်တော်ယာဉ်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်း။ (Registration of Vehicles in International Traffic)
ပုပ်သိုးပျက်စီးလွယ်သော ပစ္စည်းများသယ်ဆောင်ခြင်း။ (Carriage of Perishable Goods)
နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများလွယ်ကူထိရောက်မြန်ဆန်ရေး (Facilitation of Frontier Crossing Formalities)
လူများနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်သွားလာခြင်း (Cross Border Movement of People)
ဖြတ်သန်းခြင်းနှင့်ပြည်တွင်းအကောက်ခွန်စစ်ဆေးခြင်းစနစ်။ (Transit and Inland Clearance Customs Regime)
ယာဉ်သွားလာမှု စည်းမျဉ်းများနှင့် လမ်းညွှန်းအမှတ်အသားများ။ (Road Traffic Regulation and Signage)
မော်တော်ယာဉ်များယာယီဝင်ထွက်ခြင်း။ (Temporary Importation of Motor Vehicle)
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများကို လိုင်စင်ထုတ် ပေးခြင်းဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ( Criteria for Licensing of Operators for Cross-Border
ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ (Conditions of Transport)
လမ်းနှင့်တံတားဆောက်လုပ်မှုစံချိန်စံညွှန်းများ ( Road and Bridge Design and Construction Standards and Specifications)
လိုအပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အထောက်အကူပြုမှုများ (Border Crossing and Transit Facilities and services)
ဘက်စုံသယ်ယူပို့‌ဆောင်သူတာဝန်များ (Multimodal Carrier Liability Regime)
ဘက်စုံသယ်ယူပို့ဆောင်သူများကို လိုင်စင်ထုတ်ပေးရေးဆိုင်ရာ စံညွှန်းများ (Criteria for Licensing of Multimodal Transport Operators for Cross- Border
ကွန်တိန်နာဆိုင်ရာ အကောက်ခွန်စနစ် (Container Customs Regime)
ကုန်ပစ္စည်းခွဲခြားသတ်မှတ်ချက်စနစ် (Commodity Classifications System)
ယဉ်မောင်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာစံနှုန်းများ (Criteria for Driving license)
လမ်းကြောင်းများ၊ အဝင်အထွက်နေရာများ သတ်မှတ်ခြင်း (Designation of Corridors, Routes and Point of Entry and Exit)
ဖြတ်သန်းပို့ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာအခများ (Charges Concerning Transit Traffic)
လုပ်ငန်းပမာဏ အကြိမ်ရေနှင့် ပါမစ် ထုတ်ပေးခြင်း (Frequency and capacity of Services and Issuance of Quotas and Permits )
ကုန်သွယ်မှုလျင်မြန်ချောမွေ့စေရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာမူဘောင် (Strategic Framework for Action on Trade Facilitation and
စစ်ဆေးရေးနှင့်ပိုးမွှားကင်းရှင်းရေး စစ်ဆေးတိုင်းတာချက် Sanitary and Phytosanitary Measure-SPS
မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲ စီးပွားရေးဖိုရမ် (Greater Mekong Subregion – Business Forum
ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံများအတွက် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးအစီအစဉ် (ENHANCED INTEGRATED FRAMEWORK – EIF)
ထုတ်လုပ်နိုင်မှု အဟန့်အတားများ (supply-side constraints)
အကောက်ခွန်လုပ်ငန်းစဉ်များ (Customs Procedures)
စစ်ဆေးရေးနှင့် ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်း စစ်ဆေးတိုင်းတာ ချက်များ (Inspection and Quarantine Measure)
ကုန်သွယ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်သယ်ယူပို့ဆောင်မှုကိစ္စရပ်များ (Trade Logistics)
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များရွေ့‌ပြောင်းသွားလာမှု (mobility of Business People)
လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအဆင့်-၁ (Tier 1)
လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအဆင့်-၂ (Tier 2)
Certificate of Exporter/Importer Registration (ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း)
BUSINESS OPPORTUNITY စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ
အသေးစား နှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (SMEs)
အာဆီယံယှဉ်ပြိုင်မှု ဆိုင်ရာကျွမ်း ကျင်သူများအဖွဲ့ (ASEAN Experts Group on Competition-AEGC)
အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းပုံစံ [ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint]
ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒဆန်းစစ်ခြင်း(TPR) TRADE POLICY REVIEW REPORT
ရ်ာဘာ အထွက်နှုန်း များ တိုးမြင့်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း Improving Rubber Productivity
မြန်မာနိုင်ငံရော်ဘာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူ များအသင်း ( Myanmar Rubber Planters and Producers Association –MRPPA)
နိုင်ငံတကာရော်ဘာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘုတ်အဖွဲ့ (International Rubber Research and Development Board-IRRDB)
ကောင်းမွန်သော စိုက်ပျိုးရေးကျင့်စဉ် များဖြင့် ရော်ဘာ အထွက်နှုန်း များ တိုးမြင့်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (International workshop on
Improving Rubber Productivity through Good Agricultural Practices)
ပူးပေါင်းအဖွဲ့ရုံး(One Stop Services)
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး ပေးသွင်းသည့်စာရွက် Certificate of Registration of Documents (CRD)
လုပ်ငန်းခွင့်ပြုမိန့် (Form of Permit)
အာမခံသိုလှောင်ရုံ Bonded Warehouse
အာမခံကုန်လှောင်ရုံ (Bonded Warehouse)
Certificate of Business Representative (စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း)
မြန်မာနိုင်ငံ၏ကုန်သွယ်မှုစနစ် Trade Regime of Myanmar
ကုလသမဂ္ဂ၏ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုညီလာခံ (United Nations Conference on Trade and Development- UNCTAD)
မူဝါဒဆိုင်ရာစီမံဆောင်ရွက် မှုများ (Policy Measures)
အကောက်ခွန်မဟုတ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ Non-Tariff Measures-NTMs
အာဆီယံကုန်စည်ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက် (ASEAN Trade in Goods Agreement – ATIGA
အကောက်ခွန်မဟုတ်သောစီမံဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်များကိုကျင့်သုံးခြင်း (Application of Non-Tariff Measures)
အရေအတွက် အကန့်အသတ်များကိုဖျက်သိမ်းဖယ်ရှားခြင်း (General Elimination of Quantitative Restrictions)
အခြားသောအကောက်ခွန်မဟုတ်သောအတားအဆီးများကိုဖျက်သိမ်းဖယ်ရှားခြင်း (Elimination of Other Non-Tariff Barriers)
နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုကန့်သတ်ခြင်း (Foreign Exchange Restrictions)
သွင်းကုန်လိုင်စင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (Import Licensing Procedures)
နိုင်ငံ ခြားသုံးငွေများ (FE)
Agent Card (ကိုယ်စားလှယ်မှတ်ပုံတင်ကတ်)
ီအရည်အသွေးစစ်ဆေးချက် (Lab Test Result)
လုပ်ငန်းကော်မတီ (Working Committee)
ဂျပန်နိုင်ငံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ (JICA)
အရောင်းအ၀ယ်စာချုပ် (Sales Contract)
တွက်ချက်မှုစာရင်း (Costing Sheet)
ပုံမှန်ကုန်သွယ်မှု (Conventional Trade)။
နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု (Border Trade) ။
(Export Permit ) ပို့ကုန်ခွင့်ပြုချက်
သွင်းကုန် လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည့် ကုန်စည်စာရင်း (Negative List)
တစ်ဆင့်ဖြတ်သန်းကုန်သွယ်မှု (Transit Trade)
ငွေလွှဲစာတမ်းဖွင့်လှစ်သည့်နည်းလမ်း( Normal LC, TT )
သရုပ်ပြပွဲ (Demonstration)ြ
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရင်း သုံးစွဲရင်း ကုန်ဆုံးသွားမည့် ပစ္စည်းများ၊ (Consumable Goods)
တင်ပို့/ တင်သွင်း ခွင့်ပြုသည့် Incoterms (International Commercial Terms) များ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သည်ကြီးများအသင်း(International Chamber Of Commerce) (ICC)
အသုံးပြုပြီးစက်ပစ္စည်း (Used Machine)
ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ် (Model Year)
ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ (Country of Origin)
အွန်လိုင်း စနစ်ဖြင့် ပို့ကုန် သွင်းကုန် လိုင်စင်ထုတ် ပေးသည့်စနစ်(IELPS System)
သက်နုလုပ်ငန်း(infant industry )
ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုစရိတ်များကို လျှော့ ချခြင်း (Reducing Transaction Cost)
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် လွယ်ကူမှု အညွှန်းကိန်း (Ease of Doing Business)
ကုန်သွယ်မှုကုန်ကျစရိတ် (Trade Transaction Cost)
Open General Licence (OGL) စနစ် (အထွေထွေတင်သွင်းခွင့်အမိန့်)
သီးနှံ (ရူပ) ဓါတ်ခွဲခန်း (Grain Physical Laboratory)
သီးနှံ (ဓါတု) ဓါတ်ခွဲခန်း (Grain Chemical Laboratory)
ဆီနှင့်ဆီထွက်သီးနှံဓါတ်ခွဲခန်း (Oil and Fats Laboratory)
အာဖလာဆော့ဆင်ဓါတ်ခွဲခန်း (Aflatoxins Laboratory)
ပြည်ပမှ ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းခွင့် (Import Right)
left-hand drive ဘယ်မောင်း
ဓါတု အန္တရာယ် (Chemical Hazards)
ဇီဝ အန္တရာယ် (Biological Hazards)
ရုပ်ပစ္စည်း အန္တရာယ် (Physical Hazards)
ဓါတု ညစ်ညမ်းမှု (Chemical Contaminants)
လယ်ယာသုံး ဓါတု ပစ္စည်း အကြွင်း အကျန်များ (Agrochemical Residues)
တိရိစ္ဆာန်သုံး ဆေးဝါး အကြွင်း အကျန်များ (Veterinary Medicine Residues)
အဆိပ်သင့်စေသော သတ္ထု ပစ္စည်များ (Toxic Heavy Metals)
စားသောက်ကုန် အားဖြည့် ပစ္စည်းများ (Food Additives)
အနုဇီဝ ပစ္စည်း ပါဝင်မှု (Microbiological Hazards)
မှိုဆိပ် ပါဝင်မှု (Mycotoxins)
ဓါတ်မတည့် တုန့်ပြန်ခြင်း (Allergic Reaction)
မျိုးရိုး ဗီဇ ပြုပြင် ပြောင်းလဲ ထားတဲ့ အစား အသောက်များ (Genetically Modified Foods)
ဓါတ် ရောင်ခြည်သင့် အစား အသောက်များ (Irradiated Foods)
အရော အနှော ပစ္စည်း ဓါတ်ပြုခြင်းများ (Adulteration)
သီးလုံး ဖောက်ယင် (Fruit Fly)
ပင်စည်ထိုးပိုး (Stem borer)
အစေ့ထိုးပိုး (Stem borer)
ခေါင်ညွှန့်ထိုးပိုး (Shoot or tip borer)
ပိုးစေးနှဲ (Mealy bug)၊ အကြေးပိုး (Scale insect)
ပွေး (Bamboo rat)
ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျ ရနျပုံငှေ ဆိုငျရာ ပေါငျးစပျညှိနှိုငျးရေးအဖှဲ့ (Joint Coordinating Body for Peace Process Funding JCB)
လူသားခငျြးစာနာထောကျထားမှု အကူအညီအထောကျအပံ့ ပေးရေး၊ ပွနျလညျ နရောခထြားရေး၊ ဖှံ့ဖွိုးရေးစီမံကိနျး (UEHRD)
အမြိုးသား ပွနျလညျ သငျ့မွတျရေးနှငျ့ငွိမျးခမျြးရေးဗဟိုဌာန ငွိမျးခမျြးရေး ရနျပုံငှေ (NRPC-Peace Fund)
ကမ်ဘောဒီးယား-လာအို-မွနျမာ-ဗီယကျနမျ (၄) နိုငျငံစီးပှားရေးပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု. Cambodia- Laos- Myanmar-Vietnan (CLMV)
မွနျမာကုနျသှယျမှုဗဟိုဌာန (Myanmar Trade Center).
English-Myanmar Translation Collection2April 7, 2018
Filed under: English,Language,Myanmar — hhh123 @ 3:10 pm
Tags: Bilingual, English, Myanmar, Translation
President Office	နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး
Government Office	ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး
Administration Branch	အုပ်ချုပ်ရေး၊ လူ့အရင်းအမြစ်စီခံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ
Incharge Office	တာဝန်မှူးရုံးခန်း
Hluttaw Office	လွှတ်တော်ရုံး
Amyotha Hluttaw	အမျိုးသားလွတ်တော်ရုံး
Pyidaungsu Hluttaw	ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ရုံး
Pyithu Hluttaw	ပြည်သူ့လွတ်တော်ရုံး
Union Election Commission	ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး
Admin Department	စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန
Duty Office	တာဝန်မှူးရုံးခန်း
External Relation Department	ပြင်ပဆက်ဆံရေးဌာန
Research and Record Department	သုတေသနှင့်မှတ်တမ်းဌာန
The Union Constitution Tribunal	နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး
Duty Office	တာဝန်မှူးရုံး
The Supreme Court of The Union	ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်
Attorney General	ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး
Office of The Auditor General of The Union	ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
Admin, Training and Research Department	စီမံရေးရာ၊ လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသနဦးစီးဌာန
Auditing Department	စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
Union Civil Service Board	ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
Central Institute of Civil Service (Upper Myanmar)	ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)
Civil Service Affairs Department	ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာန
Civil Service Selection & Training Department	ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
Central Bank of Myanmar	မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်
Account Department	စာရင်းဌာန
Administration and Human Resources Department	စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန
Administration & Information Technology Department	စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်နည်းပညာဌာန
Banking Regulation and Anti-Money Laundering Department	ဘဏ်လုပ်ငန်းဥပဒေစည်းမျဉ်း၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်တိုက်ဖျက်ရေးဌာန
Currency Administration Department	ငွေကြေးလုပ်ငန်းအုပ်ချုပ်မှုဌာန
Information and Security Department	သတင်းနှင့်လုံခြုံရေးဌာန
Internal Audit Department	ဘဏ်တွင်းစာရင်းစစ်ဌာန
Monetary Policy Affairs and Financial Institutions Regulation Department	ငွေကြေးမူဝါဒရေးရာနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းဥပဒေစည်းမျဉ်းဌာန
Monetary Policy, Research and Statistics Department	ငွေကြေးမူဝါဒ၊ သုတေသနနှင့်စာရင်းအင်းဌာန
Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation	စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
Agricultural Land Management and Statistics Department	လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန
Agricultural Mechanization Department	စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
Agricultural Research Department	စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန
Agriculture Department	စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
Co-Operative Department	သမဝါယမဦးစီးဌာန
Fisheries Department	ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
Irrigation and Water Management Department	ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန
Livestock Breeding and Veterinary Department	မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန
Planning Department	စီမံကိန်းဦးစီးဌာန
Rural Development Department	ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
Small Scale Industries Department	အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
University of Veterinary Science	မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်
Yezin Agricultural University	ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်
Ministry of Border Affairs	နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန
Education and Training Department	ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
Progress of Border Areas and National Races Department	နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
Ministry of Commerce	စီပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန
Consumer Affairs Department	စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
Account Division	ငွေစာရင်းဌာနခွဲ
Administrative Division	စီမံရေးရာဌာနခွဲ
Consumer Affairs Division	စားသုံးသူရေးရာဌာနခွဲ
Information Technology and Quality Management Division	သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲ
Policy Studying Planning and Statistics Division	မူဝါဒလေ့လာရေးနှင့်စီမံကိန်းစာရင်းအင်းဌာနခွဲ
Product Safety Division	ထုတ်ကုန်လုံခြုံစိတ်ချရမှုဌာနခွဲ
Trade Fair and Trade Centers Division	ကုန်စည်ပြပွဲနှင့်ကုန်သွယ်မှုဗဟိုဌာနများခွဲ
Myanmar Trade Promotion Organization	မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့
Domestic Trade Division	ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုဌာနခွဲ
Planning and Account Division	စီမံကိန်းနှင့်ငွေစာရင်းဌာနခွဲ
Strategic Trade Promotion Division	မဟာဗျူဟာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲ
Trade Development Division	ကုန်သွယ်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ
Trade Information and Research Division	ကုန်သွယ်မှုသတင်းအချက်အလက်နှင့်သုတေသနဌာနခွဲ
Trade Department	ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
Bilateral Trade Relation Division	နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုဆက်ဆံရေးဌာနခွဲ
Border Posts Coordination and Supervision Division	နယ်စခန်းများညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးဌာနခွဲ
Competition Policy Division	ယှဉ်ပြိုင်မှု မူဝါဒဌာနခွဲ
Export/Import Division	ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲ
Information Technology Division	သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဌာနခွဲ
Internal Audit Division	ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းနှင့်စာရင်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ
Planning and Staistics Division	စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ
Regional Economic Co-Operation Division	ဒေသတွင်းစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဌာနခွဲ
Trade Eduction Division	ကုန်သွယ်မှုပညာပေးရေးဌာနခွဲ
Trade Policy Division	ကုန်သွယ်မှု မူဝါဒဌာနခွဲ
WTO & International Trade and Related Division	အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုနှင့်ဆက်နွယ်နေသောအဖွဲ့အစည်းများဌာနခွဲ
Ministry of Construction	ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
Bridge Department	တံတားဦးစီးဌာန
Building Department	အဆောက်အဦးစီးဌာန
Highways Department	လမ်းဦးစီးဌာန
Urban and Housing Development Department	မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန
Ministry of Defence	ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
Accounts Department	ငွေစာရင်းရုံး
Directorate of Procurement	ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
Ministry of Education	ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
Alternative Education Department	ကျောင်းပြင်ပပညာရေးဦးစီးဌာန
Basic Education Department	အခြေခံပညာဦးစီးဌာန
Educational Research, Planning and Training Department	ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
Higher Education Department	အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန
Myanmar Examinations Department	မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန
Myanmar Nationalitle’s Languages Department	မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဦးစီးဌာန
Research and Innovation Department	သုတေသနနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန
Technical and Vocational Education and Training Department	နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန
Technology Promotion and Coordination Department	စက်မှုနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
Ministry of Electricity and Energy	လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
Electric Power Generation Enterprise	လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း
Electric Power Planning Department	လျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
Electricity Supply Enterprise	လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း
Hydropower Implementation Department	ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန
Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE)	မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း
Myanma Petrochemical Enterprise (MPE)	မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း
Myanma Petroleum Products Enterprise (MPPE)	မြန်မာ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း
Power Transmittion and System Control Department	လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွတ်ရေးနှင့်ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန
Ministry of Ethnic Affairs	တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန
Ministry of Foreign Affairs	နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန
ASEAN Affairs Department	အာဆီယံရေးရာဦးစီးဌာန
Consular & Legal Affairs Department	ကောင်စစ်ရေးရာနှင့်ဥပဒေရေးရာဦးစီးဌာန
International Organizations & Economic Department	အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် စီးပွားရေးဦးစီးဌာန
Planning & Administrative Department	စီမံကိန်းနှင့်စီမံရေးရာဦးစီးဌာန
Political Department	နိုင်ငံရေးရာဦးစီးဌာန
Protocol Department	သံတမန်ရေးရာဦးစီးဌာန
Ministry of Healh and Sports	ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန
Food and Drug Administration Development	အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန
Health Professional Resource Development and Management Department	ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန
Medical Research Department (Central Myanmar)	ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း)
Medical Research Department (Upper Myanmar)	ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်း)
Medical Services Department	ကုသရေးဦးစီးဌာန
Public Health Department	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန
Sport and Physical Education Department	အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန
Competition and Training Section (1)	ယှဉ်ပြိုင်ရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဌာနခွဲ(၁)
Competition and Training Section (2)	ယှဉ်ပြိုင်ရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဌာနခွဲ(၂)
Mass Sport and Education Section	လူထု၊ပညာဌာနခွဲ
Planning and Research Section	စီမံကိန်းနှင့်သုတေသနဌာနခွဲ
Sport and Education Section	အားကစားနှင့်ပညာရေးဌာနခွဲ
Sport Gound and Stadium Section	အားကစားနှင့်အားကစားရုံဌာနခွဲ
Sport Medical Section	အားကစားဆေးဘက်ဌာနခွဲ
Traditional Medicine Department	တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန
Ministry of Home Affairs	ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန
Bureau of Special Investigation	အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
Fire Service Department	မီးသတ်ဦးစီးဌာန
General Administration Department	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
Myanmar Police Force	မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့
Prison Department	အကျဉ်းဦးစီးဌာန
Ministry of Hotel & Tourism	ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန
Directorate of Hotels & Tourism	ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
Directorate of Hotels and Tourism Services Development	ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
Ministry of Industry	စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
Directorate of Industrial Collaboration	စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
Directorate of Industrial Supervision and Inspection	စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
Myanma Pharmaceutical Industries	မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း
No.(1) Heavy Industries Enterprise	အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
No.(2) Heavy Industries Enterprise	အမှတ်(၂)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
No.(3) Heavy Industries Enterprise	အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
Ministry of Information	ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန
Information & Public Relations Department	ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန
Myanma Radio & Television	မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား
Nay Pyi Taw Press	နေပြည်တော်သတင်းစာတိုက်
News & Periodicals Enterprise	သတင်းစာနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း
Printing and Publishing Department	ပုံနှိပ်ရေးနှင့်စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာန
Ministry of Labour, Immigration and Population	အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
Factories & General Labour Laws Inspection Department	အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမား ဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
Immigration Department	လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန
Labour Department	အလုပ်သမား ညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာန
Labour Relations Department	အလုပ်သမားရေးရာ ဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာန
National Registration & Citizenship Department	အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်နှင့်နိုင်ငံသားဦးစီးဌာန
Population Depaetment	ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန
Social Security Board	လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့
Ministry of National Resources and Environmental Conservation	သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန
Dry Zone Greening Department	အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြေရေးဦးစီးဌာန
Environmental Conservation Department	ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန
Admin Division	စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန
Natural Resources Conversation and Environmental Impact Assesment Division	သယံဇာတထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ရေးဌာန
Policy, International Relation and Training Research Division	မူဝါဒ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးနှင့် လေ့ကျင့်၊သုတေသနဌာန
Pollution Control Division	ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကာကွယ်ရေးဌာန
Forest Department	သစ်တောဦးစီးဌာန
Administration Division	စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန
Extension Division	တိုးချဲ့ပညာပေးရေးဌာန
Finance Division	ဘဏ္ဍာရေးဌာန
Forest Research Institute	သစ်တောသုတေသနဌာန
Inspection Division	စစ်ဆေးရေးဌာန
Natural Forest and Plantation Division	သဘာဝတောနှင့် စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းဌာန
Nature & Wildlife Conservation Division သဘာဝဝန်းကျင်နှင့်သားငှက်တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးဌာန
Planning and Statistic Division စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာန
Training & Research Development Division လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသနဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန
Watershed Management Division ရေဝေရေလဲဒေသအုပ်ချုပ်ရေးဌာန
Zoological Gardens Division တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်များဌာန
Geological Survey & Mineral Exploration Department ဘူမိဗေဒလေ့လာရေးနှင့်ဓာတ်သတ္တုရှာဖွေရေးဦးစီးဌာန
Mines Department သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန
Myanma Gems Enterprise မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း
Myanma Pearl Enterprise မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း
No (1) Mining Enterprise အမှတ်(၁)သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း
No (2) Mining Enterprise အမှတ်(၂) သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း
Survey Department မြေတိုင်းဦးစီးဌာန
Ministry of Planning and Finance စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
Budget Department ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန
Central Equipment Statistic and Inspection Department ဗဟိုစက်ပစ္စည်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
Centtal Statistical Organization ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
Customs Department အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန
Directorate of Investment and Company Administration ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
Financial Regulatory Department ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
Foreign Economic Relations Department နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
Myanma Economic Bank မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်
National Archives Development အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန
Pension Department ပင်စင်ဦးစီးဌာန Planning Department စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန
Revenue Appellate Tribunal အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ရုံး
Treasury Department ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန
Ministry of Religious Affairs and Culture သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
Archaeology and National Museum Department ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန
Fine Arts Department အနုပညာဦးစီးဌာန
Historical Research and National Library Department သမိုင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ဦးစီးဌာန
International Theravada Buddhist Missionary University အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်
Religious Affairs Department သာသနာရေးဦးစီးဌာန
The Promotion and Propagation of Sasana Department သာသနာတော် ထွန်းကားပြန့်ပွားရေး ဦးစီးဌာန
Ministry of Social Welfare, Relief & Resettlement လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည် နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန
Relief & Resettlement Department ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာန
Social Welfare Department လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
Ministry of Transport and Communications ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
Central Institute of Transport and Communications ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း
Directorate of Water Resources and Improvement Of River Systems ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
Information Technology and Cyber Security Department သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန
Inland Water Transport ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
Marine Administration Department ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန
Meteorology & Hydrology Department မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
Myanma Post မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း
Myanma Posts & Telecommunications မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း
Myanma Railways မြန်မာ့မီးရထား
Myanmar National Airlines မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း
Post and Telecommunication Department ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
Road Transport ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး
Road Transport Administration Department ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
Nay Pyi Taw City Development Committee နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
Administration Department စီမံရေးရာဌာန
Assessors Department ရာပြတ်ဌာန
Budget and Account Department ဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေစာရင်းဌာန
Central Stores Department ဗဟိုပစ္စည်းထိန်းဌာန
City Planning and Land Admin Department မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့်မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန
Committe Office ကော်မတီရုံး (မြို့တော်ခန်းမ)
Coordination Department ညှိနှုင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာန
Duty Office တာဝန်မှူးရုံးခန်း
Engineering Department (Building) အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)
Engineering Department (Roads and Bridges) အင်ဂျင်နီယာဌာန(လမ်းတံတား)
Engineering Department (Water & Sanitation) အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)
Garden and Playground Parks Department ပန်းဥယျာဉ်နှင့်အားကစားကွင်းများဌာန
Health Department ကျန်းမာရေးဌာန
Inspection Department စစ်ဆေးရေးဌာန
Markets Department ဈေးများဌာန
Motor Transport and Workshop Department စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်ဌာန
Nay Pyi Taw Guest House (1) နေပြည်တော်စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာ (၁)
Nay Pyi Taw Guest House (2) နေပြည်တော်စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာ (၂)
Pollution Control and Cleaning Department ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးဌာန
Production Department ထုတ်လုပ်ရေးဌာန
Public Relations and Information Department ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန
Revenue Department အခွန်ဌာန
Security and Discipline Department လုံခြုံရေးနှင့်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဌာန
Veterinary and Slaughter House Department တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာန
Nay Pyi Taw Council နေပြည်တော်ကောင်စီ
Nay Pyi Taw City Development Committee (Township Administration Offices) နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ (မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများ)
Pyinmanar Township ပျဉ်းမနားမြို့နယ်
Datkhina Thiri Township ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်
Lewe Township လယ်ဝေးမြို့နယ်
Ottara Thiri Township ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်
Pobba Thiri Township ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်
Tatkone Township တပ်ကုန်းမြို့နယ်
Zabu Thiri Township ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်
Zeyar Thiri Township ဇေယျာသီရိမြို့နယ်
Nay Pyi Taw City Development Committee (Sport Complex, Hospital, Bank, Highway Bus Compound and Markets) နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (အားကစားရုံ၊ ဆေးရုံ၊ ဘဏ်၊ အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နား စခန်း နှင့်ဈေးများ) Arharya Thukha Market အာဟာရသုခဈေး Cement Factory (Taung Phi Lar) ဘိလပ်မြေစက်ရုံ (တောင်ဖီလာ) Duty Office တာဝန်မှူးရုံးခန်း Nay Pyi Taw Bawga Thiri Highway Bus Compound နေပြည်တော်ဘောဂသီရိအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း Nay Pyi Taw Brick Factory နေပြည်တော်အုတ်စက်ရုံ Nay Pyi Taw Myoe Ma Market နေပြည်တော်မြို့မဈေး Nay Pyi Taw Sibin Bank Ltd. (Ottara Thiri) နေပြည်တော်စည်ပင်ဘဏ်လီမိတက် (ဥတ္တရသီရိ) Nay Pyi Taw Sibin Bank Ltd. (Zabu Thiri) နေပြည်တော်စည်ပင်ဘဏ်လီမိတက် (ဇမ္ဗူသီရိ)
Nay Pyi Taw Thapyay Kone Market	နေပြည်တော်သပြေကုန်းဈေး
Pobba Thiri Market	ပုဗ္ဗသီရိဈေး
Pyinmanar Myoe Ma Market	ပျဉ်းမနားမြို့မဈေး
Tatkone Market	တပ်ကုန်းဈေး
Thiri Yadanar Shopping Complex	သီရိရတနာအဆင့်မြင့်ဈေး
Zabu Thiri Hospital	ဇမ္ဗူသီရိဆေးရုံကြီး
Nay Pyi Taw City Development Committe	နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
President Office	နိုငျငံတျောသမ်မတရုံး
Government Office	ပွညျထောငျစုအစိုးရအဖှဲ့ရုံး
Administration Branch	အုပျခြုပျရေး၊ လူ့အရငျးအမွဈစီခံခနျ့ခှဲမှုဌာနခှဲ
Incharge Office	တာဝနျမှူးရုံးခနျး
Hluttaw Office	လှတျတျောရုံး
Amyotha Hluttaw	အမြိုးသားလှတျတျောရုံး
Pyidaungsu Hluttaw	ပွညျထောငျစုလှတျတျောရုံး
Pyithu Hluttaw	ပွညျသူ့လှတျတျောရုံး
Union Election Commission	ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျရုံး
Admin Department	စီမံခနျ့ခှဲရေးဌာန
Duty Office	တာဝနျမှူးရုံးခနျး
External Relation Department	ပွငျပဆကျဆံရေးဌာန
Research and Record Department	သုတသေနှငျ့မှတျတမျးဌာန
The Union Constitution Tribunal	နိုငျငံတျောဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒဆေိုငျရာခုံရုံး
Duty Office	တာဝနျမှူးရုံး
The Supreme Court of The Union	ပွညျထောငျစုတရားလှတျတျောခြုပျ
Attorney General	ပွညျထောငျစုရှနေ့ခြေုပျရုံး
Office of The Auditor General of The Union	ပွညျထောငျစုစာရငျးစဈခြုပျရုံး
Admin, Training and Research Department	စီမံရေးရာ၊ လကေ့ငျြ့ရေးနှငျ့	သုတသေနဦးစီးဌာန
Auditing Department	စဈဆေးရေးဦးစီးဌာန
Union Civil Service Board	ပွညျထောငျစုရာထူးဝနျအဖှဲ့
Central Institute of Civil Service (Upper Myanmar)	ဗဟိုဝနျထမျးတက်ကသိုလျ(အထကျမွနျမာပွညျ)
Civil Service Affairs Department	၀နျထမျးရေးရာဦးစီးဌာန
Civil Service Selection & Training Department	၀နျထမျးရှေးခယျြလကေ့ငျြ့ရေးဦးစီးဌာန
Central Bank of Myanmar	မွနျမာနိုငျငံတျောဗဟိုဘဏျ
Account Department	စာရငျးဌာန
Administration and Human Resources Department	စီမံခနျ့ခှဲမှုနှငျ့ လူသားအရငျးအမွဈ ဖှံ့ဖွိုးရေးဌာန
Administration & Information Technology Department	စီမံခနျ့ခှဲမှုနှငျ့နညျးပညာဌာန
Banking Regulation and Anti-Money Laundering Department	ဘဏျလုပျငနျးဥပဒစေညျးမဉျြး၊ ငှကွေေးခဝါခမြှုနှငျ့တိုကျဖကျြရေးဌာန
Currency Administration Department	ငှကွေေးလုပျငနျးအုပျခြုပျမှုဌာန
Information and Security Department	သတငျးနှငျ့လုံခွုံရေးဌာန
Internal Audit Department	ဘဏျတှငျးစာရငျးစဈဌာန
Monetary Policy Affairs and Financial Institutions Regulation Department	ငှကွေေးမူဝါဒရေးရာနှငျ့ ဘဏျလုပျငနျးဥပဒစေညျးမဉျြးဌာန
Monetary Policy, Research and Statistics Department	ငှကွေေးမူဝါဒ၊ သုတသေနနှငျ့စာရငျးအငျးဌာန
Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation	စိုကျပြိုးရေး၊ မှေးမွူရေးနှငျ့ဆညျမွောငျးဝနျကွီးဌာန
Agricultural Land Management and Statistics Department	လယျယာမွစေီမံခနျ့ခှဲရေးနှငျ့စာရငျးအငျးဦးစီးဌာန
Agricultural Mechanization Department	စကျမှုလယျယာဦးစီးဌာန
Agricultural Research Department	စိုကျပြိုးရေးသုတသေနဦးစီးဌာန
Agriculture Department	စိုကျပြိုးရေးဦးစီးဌာန
Fisheries Department	ငါးလုပျငနျးဦးစီးဌာန
Irrigation and Water Management Department	ဆညျမွောငျးနှငျ့ရအေသုံးခမြှုစီမံခနျ့ခှဲရေးဦးစီးဌာန
Livestock Breeding and Veterinary Department	မှေးမွူရေးနှငျ့ကုသရေးဦးစီးဌာန
Planning Department	စီမံကိနျးဦးစီးဌာန
Rural Development Department	ကြေးလကျဒသေဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးဦးစီးဌာန
Small Scale Industries Department	အသေးစားစကျမှုလကျမှုလုပျငနျးဦးစီးဌာန
University of Veterinary Science	မှေးမွူရေးဆိုငျရာဆေးတက်ကသိုလျ
Yezin Agricultural University	ရဆေငျးစိုကျပြိုးရေးတက်ကသိုလျ
Ministry of Border Affairs	နယျစပျရေးရာဝနျကွီးဌာန
Education and Training Department	ပညာရေးနှငျ့လကေ့ငျြ့ရေးဦးစီးဌာန
Progress of Border Areas and National Races Department	နယျစပျဒသေနှငျ့တိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးဦးစီးဌာန
Ministry of Commerce	စီပှားရေးနှငျ့ ကူးသနျးရောငျးဝယျရေး ဝနျကွီးဌာန
Consumer Affairs Department	စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
Account Division	ငှစောရငျးဌာနခှဲ
Administrative Division	စီမံရေးရာဌာနခှဲ
Consumer Affairs Division	စားသုံးသူရေးရာဌာနခှဲ
Information Technology and Quality Management Division	သတငျးအခကျြအလကျနညျးပညာနှငျ့ အရညျအသှေးစီမံခနျ့ခှဲရေးဌာနခှဲ
Policy Studying Planning and Statistics Division	မူဝါဒလလေ့ာရေးနှငျ့စီမံကိနျးစာရငျးအငျးဌာနခှဲ
Product Safety Division	ထုတျကုနျလုံခွုံစိတျခရြမှုဌာနခှဲ
Trade Fair and Trade Centers Division	ကုနျစညျပွပှဲနှငျ့ကုနျသှယျမှုဗဟိုဌာနမြားခှဲ
Myanmar Trade Promotion Organization	မွနျမာကုနျသှယျမှုမွှငျ့တငျရေးအဖှဲ့
Domestic Trade Division	ပွညျတှငျးကုနျသှယျမှုဌာနခှဲ
Planning and Account Division	စီမံကိနျးနှငျ့ငှစောရငျးဌာနခှဲ
Strategic Trade Promotion Division	မဟာဗြူဟာကုနျသှယျမှုမွှငျ့တငျရေးဌာနခှဲ
Trade Development Division	ကုနျသှယျမှုဖှံ့ဖွိုးရေးဌာနခှဲ
Trade Information and Research Division	ကုနျသှယျမှုသတငျးအခကျြအလကျနှငျ့သုတသေနဌာနခှဲ
Trade Department	ကုနျသှယျရေးဦးစီးဌာန
Bilateral Trade Relation Division	နှဈနိုငျငံကုနျသှယျမှုဆကျဆံရေးဌာနခှဲ
Border Posts Coordination and Supervision Division	နယျစခနျးမြားညှိနှိုငျးကှပျကဲရေးဌာနခှဲ
Competition Policy Division	ယှဉျပွိုငျမှု မူဝါဒဌာနခှဲ
Export/Import Division	ပို့ကုနျသှငျးကုနျလုပျငနျးဌာနခှဲ
Information Technology Division	သတငျးအခကျြအလကျနှငျ့နညျးပညာဌာနခှဲ
Internal Audit Division	ဌာနတှငျးလုပျငနျးနှငျ့စာရငျးစဈဆေးရေးဌာနခှဲ
Planning and Staistics Division	စီမံကိနျးနှငျ့စာရငျးအငျးဌာနခှဲ
Regional Economic Co-Operation Division	ဒသေတှငျးစီးပှားရေးပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုဌာနခှဲ
Trade Eduction Division	ကုနျသှယျမှုပညာပေးရေးဌာနခှဲ
Trade Policy Division	ကုနျသှယျမှု မူဝါဒဌာနခှဲ
WTO & International Trade and Related Division	အပွညျပွညျဆိုငျရာကုနျသှယျမှုနှငျ့ဆကျနှယျနသေောအဖှဲ့အစညျးမြားဌာနခှဲ
Ministry of Construction	ဆောကျလုပျရေးဝနျကွီးဌာန
Building Department	အဆောကျအဦဦးစီးဌာန
Highways Department	လမျးဦးစီးဌာန
Urban and Housing Development Department	မွို့ပွနှငျ့အိမျရာဖှံ့ဖွိုးရေးဦးစီးဌာန
Ministry of Defence	ကာကှယျရေးဝနျကွီးဌာန
Accounts Department	ငှစောရငျးရုံး
Directorate of Procurement	ပစ်စညျးဝယျယူမှုညှနျကွားရေးမှူးရုံး
Ministry of Education	ပညာရေးဝနျကွီးဌာန
Alternative Education Department	ကြောငျးပွငျပပညာရေးဦးစီးဌာန
Basic Education Department	အခွခေံပညာဦးစီးဌာန
Educational Research, Planning and Training Department	ပညာရေးသုတသေန၊ စီမံကိနျးနှငျ့လကေ့ငျြ့ရေးဦးစီးဌာန
Higher Education Department	အဆငျ့မွငျ့ပညာဦးစီးဌာန
Myanmar Examinations Department	မွနျမာနိုငျငံစာစဈဦးစီးဌာန
Myanmar Nationalitle’s Languages Department	မွနျမာနိုငျငံတိုငျးရငျးသားဘာသာစကားဦးစီးဌာန
Research and Innovation Department	သုတသေနနှငျ့ တီထှငျဆနျးသဈမှုဦးစီးဌာန
Technical and Vocational Education and Training Department	နညျးပညာ၊ သကျမှေးပညာနှငျ့လကေ့ငျြ့ရေးဦးစီးဌာန
Technology Promotion and Coordination Department	စကျမှုနညျးပညာမွှငျ့တငျရေးနှငျ့ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဦးစီးဌာန
Ministry of Electricity and Energy	လြှပျစဈနှငျ့စှမျးအငျဝနျကွီးဌာန
Electric Power Generation Enterprise	လြှပျစဈဓာတျအားထုတျလုပျရေးလုပျငနျး
Electric Power Planning Department	လြှပျစဈစှမျးအားစီမံရေးဦးစီးဌာန
Electricity Supply Enterprise	လြှပျစဈဓာတျအားဖွနျ့ဖွူးရေးလုပျငနျး
Hydropower Implementation Department	ရအေားလြှပျစဈအကောငျအထညျဖျောရေးဦးစီးဌာန
Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE)	မွနျမာ့ရနေံနှငျ့သဘာဝဓာတျငှလေု့ပျငနျး
Myanma Petrochemical Enterprise (MPE)	မွနျမာ့ရနေံဓာတုဗဒေလုပျငနျး
Myanma Petroleum Products Enterprise (MPPE)	မွနျမာ့ရနေံထှကျပစ်စညျးရောငျးဝယျရေးလုပျငနျး
Power Transmittion and System Control Department	လြှပျစဈဓာတျအားပို့လှတျရေးနှငျ့ကှပျကဲရေးဦးစီးဌာန
Ministry of Ethnic Affairs	တိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြားရေးရာဝနျကွီးဌာန
Ministry of Foreign Affairs	နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန
ASEAN Affairs Department	အာဆီယံရေးရာဦးစီးဌာန
Consular & Legal Affairs Department	ကောငျစဈရေးရာနှငျ့ဥပဒရေေးရာဦးစီးဌာန
International Organizations & Economic Department	အပွညျပွညျဆိုငျရာအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ စီးပှားရေးဦးစီးဌာန
Planning & Administrative Department	စီမံကိနျးနှငျ့စီမံရေးရာဦးစီးဌာန
Political Department	နိုငျငံရေးရာဦးစီးဌာန
Protocol Department	သံတမနျရေးရာဦးစီးဌာန
Ministry of Healh and Sports	ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာန
Food and Drug Administration Development	အစားအသောကျနှငျ့ဆေးဝါးကှပျကဲရေးဦးစီးဌာန
Health Professional Resource Development and Management Department	ဆေးဘကျဆိုငျရာလူ့စှမျးအားအရငျးအမွဈ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးနှငျ့ စီမံခနျ့ခှဲရေးဦးစီးဌာန
Medical Research Department (Central Myanmar)	ဆေးသုတသေနဦးစီးဌာန (မွနျမာပွညျအလယျပိုငျး)
Medical Research Department (Upper Myanmar)	ဆေးသုတသေနဦးစီးဌာန (မွနျမာပွညျအထကျပိုငျး)
Medical Services Department	ကုသရေးဦးစီးဌာန
Public Health Department	ပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဦးစီးဌာန
Sport and Physical Education Department	အားကစားနှငျ့ကာယပညာဦးစီးဌာန
Competition and Training Section (1)	ယှဉျပွိုငျရေးနှငျ့လကေ့ငျြ့ရေးဌာနခှဲ(၁)
Competition and Training Section (2)	ယှဉျပွိုငျရေးနှငျ့လကေ့ငျြ့ရေးဌာနခှဲ(၂)
Mass Sport and Education Section	လူထု၊ပညာဌာနခှဲ
Planning and Research Section	စီမံကိနျးနှငျ့သုတသေနဌာနခှဲ
Sport and Education Section	အားကစားနှငျ့ပညာရေးဌာနခှဲ
Sport Gound and Stadium Section	အားကစားနှငျ့အားကစားရုံဌာနခှဲ
Sport Medical Section	အားကစားဆေးဘကျဌာနခှဲ
Traditional Medicine Department	တိုငျးရငျးဆေးပညာဦးစီးဌာန
Ministry of Home Affairs	ပွညျထဲရေးဝနျကွီးဌာန
Bureau of Special Investigation	အထူးစုံစမျးစဈဆေးရေးဦးစီးဌာန
Fire Service Department	မီးသတျဦးစီးဌာန
General Administration Department	အထှထှေအေုပျခြုပျရေးဦးစီးဌာန
Myanmar Police Force	မွနျမာနိုငျငံရဲတပျဖှဲ့
Prison Department	အကဉျြးဦးစီးဌာန
Ministry of Hotel & Tourism	ဟိုတယျနှငျ့ခရီးသှားလာရေးလုပျငနျးဝနျကွီးဌာန
Directorate of Hotels & Tourism	ဟိုတယျနှငျ့ခရီးသှားညှနျကွားမှုဦးစီးဌာန
Directorate of Hotels and Tourism Services Development	ဟိုတယျနှငျ့ခရီးသှားလုပျငနျးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးဦးစီးဌာန
Ministry of Industry	စကျမှုဝနျကွီးဌာန
Directorate of Industrial Collaboration	စကျမှုပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဦးစီးဌာန
Directorate of Industrial Supervision and Inspection	စကျမှုကွီးကွပျရေးနှငျ့စဈဆေးရေးဦးစီးဌာန
Myanma Pharmaceutical Industries	မွနျမာ့ဆေးဝါးလုပျငနျး
No.(1) Heavy Industries Enterprise	အမှတျ(၁)အကွီးစားစကျမှုလုပျငနျး
No.(2) Heavy Industries Enterprise	အမှတျ(၂)အကွီးစားစကျမှုလုပျငနျး
No.(3) Heavy Industries Enterprise	အမှတျ(၃)အကွီးစားစကျမှုလုပျငနျး
Ministry of Information	ပွနျကွားရေးဝနျကွီးဌာန
Information & Public Relations Department	ပွနျကွားရေးနှငျ့ပွညျသူ့ဆကျဆံရေးဦးစီးဌာန
Myanma Radio & Television	မွနျမာ့အသံနှငျ့ရုပျမွငျသံကွား
Nay Pyi Taw Press	နပွေညျတျောသတငျးစာတိုကျ
News & Periodicals Enterprise	သတငျးစာနှငျ့စာနယျဇငျးလုပျငနျး
Printing and Publishing Department	ပုံနှိပျရေးနှငျ့စာအုပျထုတျဝရေေးဦးစီးဌာန
Ministry of Labour, Immigration and Population	အလုပျသမား၊လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးနှငျ့ပွညျသူ့အငျအားဝနျကွီးဌာန
Factories & General Labour Laws Inspection Department	အလုပျရုံနှငျ့အလုပျသမား ဥပဒစေဈဆေးရေးဦးစီးဌာန
Immigration Department	လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးဦးစီးဌာန
Labour Department	အလုပျသမား ညှနျကွားရေး ဦးစီးဌာန
Labour Relations Department	အလုပျသမားရေးရာ ဆကျဆံရေး ဦးစီးဌာန
National Registration & Citizenship Department	အမြိုးသားမှတျပုံတငျနှငျ့နိုငျငံသားဦးစီးဌာန
Population Depaetment	ပွညျသူ့အငျအားဦးစီးဌာန
Social Security Board	လူမှုဖူလုံရေးအဖှဲ့
Ministry of National Resources and Environmental Conservation	သယံဇာတနှငျ့သဘာဝပတျဝနျးကငျြထိနျးသိမျးရေးဝနျကွီးဌာန
Dry Zone Greening Department	အပူပိုငျးဒသေစိမျးလနျးစိုပွရေေးဦးစီးဌာန
Environmental Conservation Department	ပတျဝနျးကငျြထိနျးသိမျးရေးဦးစီးဌာန
Admin Division	စီမံခနျ့ခှဲရေးဌာန
Natural Resources Conversation and Environmental Impact Assesment Division	သယံဇာတထိနျးသိမျးရေးနှငျ့ ပတျဝနျးကငျြထိခိုကျမှု ဆနျးစဈရေးဌာန
Policy, International Relation and Training Research Division	မူဝါဒ၊ အပွညျပွညျဆိုငျရာဆကျဆံရေးနှငျ့ လကေ့ငျြ့၊သုတသေနဌာန
Pollution Control Division	ပတျဝနျးကငျြညဈညမျးမှုကာကှယျရေးဌာန
Forest Department	သဈတောဦးစီးဌာန
Administration Division	စီမံခနျ့ခှဲရေးဌာန
Extension Division	တိုးခြဲ့ပညာပေးရေးဌာန
Finance Division	ဘဏ်ဍာရေးဌာန
Forest Research Institute	သဈတောသုတသေနဌာန
Inspection Division	စဈဆေးရေးဌာန
Natural Forest and Plantation Division	သဘာဝတောနှငျ့ စိုကျခငျးလုပျငနျးဌာန
Nature & Wildlife Conservation Division သဘာဝဝနျးကငျြနှငျ့သားငှကျတိရစ်ဆာနျထိနျးသိမျးရေးဌာန
Planning and Statistic Division စီမံကိနျးနှငျ့စာရငျးအငျးဌာန
Training & Research Development Division လကေ့ငျြ့ရေးနှငျ့သုတသေနဖှံ့ဖွိုးရေးဌာန
Watershed Management Division ရဝေရေလေဲဒသေအုပျခြုပျရေးဌာန
Zoological Gardens Division တိရစ်ဆာနျဥယြာဉျမြားဌာန
Geological Survey & Mineral Exploration Department ဘူမိဗဒေလလေ့ာရေးနှငျ့ဓာတျသတ်တုရှာဖှရေေးဦးစီးဌာန
Mines Department သတ်တုတှငျးဦးစီးဌာန
Myanma Gems Enterprise မွနျမာ့ကြောကျမကျြရတနာရောငျးဝယျရေးလုပျငနျး
Myanma Pearl Enterprise မွနျမာ့ပုလဲထုတျလုပျရေးနှငျ့ ရောငျးဝယျရေးလုပျငနျး
No (1) Mining Enterprise အမှတျ(၁)သတ်တုတှငျးလုပျငနျး
No (2) Mining Enterprise အမှတျ(၂) သတ်တုတှငျးလုပျငနျး
Survey Department မွတေိုငျးဦးစီးဌာန
Ministry of Planning and Finance စီမံကိနျးနှငျ့ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီးဌာန
Budget Department ရသုံးမှနျးခွငှေစောရငျးဦးစီးဌာန
Central Equipment Statistic and Inspection Department ဗဟိုစကျပစ်စညျး၊ စာရငျးအငျးနှငျ့စဈဆေးရေးဦးစီးဌာန
Centtal Statistical Organization ဗဟိုစာရငျးအငျးအဖှဲ့
Customs Department အကောကျခှနျဦးစီးဌာန
Directorate of Investment and Company Administration ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုနှငျ့ ကုမ်ပဏီမြားညှနျကွားမှုဦးစီးဌာန
Financial Regulatory Department ငှရေေးကွေးရေးကွီးကွပျစဈဆေးရေးဦးစီးဌာန
Foreign Economic Relations Department နိုငျငံခွားစီးပှားဆကျသှယျရေးဦးစီးဌာန
Myanma Economic Bank မွနျမာ့စီးပှားရေးဘဏျ
National Archives Development အမြိုးသားမှတျတမျးမြားမျောကှနျးတိုကျဦးစီးဌာန
Pension Department ပငျစငျဦးစီးဌာန Planning Department စီမံကိနျးရေးဆှဲရေးဦးစီးဌာန
Revenue Appellate Tribunal အခှနျအယူခံခုံအဖှဲ့ရုံး
Treasury Department ငှတေိုကျဦးစီးဌာန
Ministry of Religious Affairs and Culture သာသနာရေးနှငျ့ယဉျကြေးမှုဝနျကွီးဌာန
Archaeology and National Museum Department ရှေးဟောငျးသုတသေနနှငျ့ အမြိုးသားပွတိုကျဦးစီးဌာန
Fine Arts Department အနုပညာဦးစီးဌာန
Historical Research and National Library Department သမိုငျးသုတသေနနှငျ့ အမြိုးသားစာကွညျ့တိုကျဦးစီးဌာန
International Theravada Buddhist Missionary University အပွညျပွညျဆိုငျရာထရေဝါဒ ဗုဒ်ဓသာသနာပွုတက်ကသိုလျ
Religious Affairs Department သာသနာရေးဦးစီးဌာန
The Promotion and Propagation of Sasana Department သာသနာတျော ထှနျးကားပွနျ့ပှားရေး ဦးစီးဌာန
Ministry of Social Welfare, Relief & Resettlement လူမှုဝနျထမျး၊ကယျဆယျရေးနှငျ့ပွနျလညျ နရောခထြားရေးဝနျကွီးဌာန
Relief & Resettlement Department ကယျဆယျရေးနှငျ့ပွနျလညျနရောခထြားရေးဦးစီးဌာန
Social Welfare Department လူမှုဝနျထမျးဦးစီးဌာန
Ministry of Transport and Communications ပို့ဆောငျရေးနှငျ့ဆကျသှယျရေးဝနျကွီးဌာန
Central Institute of Transport and Communications ဗဟိုပို့ဆောငျဆကျသှယျရေးကြောငျး
Directorate of Water Resources and Improvement Of River Systems ရအေရငျးအမွဈနှငျ့ မွဈခြောငျးမြားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးဦးစီးဌာန
Information Technology and Cyber Security Department သတငျးအခကျြအလကျနညျးပညာနှငျ့ ဆိုကျဘာလုံခွုံရေးဦးစီးဌာန
Inland Water Transport ပွညျတှငျးရကွေောငျးပို့ဆောငျရေး
Marine Administration Department ရကွေောငျးပို့ဆောငျရေးဦးစီးဌာန
Meteorology & Hydrology Department မိုးလဝေသနှငျ့ဇလဗဒေညှနျကွားမှုဦးစီးဌာန
Myanma Post မွနျမာ့စာတိုကျလုပျငနျး
Myanma Posts & Telecommunications မွနျမာ့ဆကျသှယျရေးလုပျငနျး
Myanma Railways မွနျမာ့မီးရထား
Myanmar National Airlines မွနျမာအမြိုးသားလကွေောငျး
Post and Telecommunication Department ဆကျသှယျရေးညှနျကွားမှုဦးစီးဌာန
Road Transport ကုနျးလမျးပို့ဆောငျရေး
Road Transport Administration Department ကုနျးလမျးပို့ဆောငျရေးညှနျကွားမှုဦးစီးဌာန
Nay Pyi Taw City Development Committee နပွေညျတျောစညျပငျသာယာရေးကျောမတီ
Administration Department စီမံရေးရာဌာန
Assessors Department ရာပွတျဌာန
Budget and Account Department ဘတျဂကျြနှငျ့ငှစောရငျးဌာန
Central Stores Department ဗဟိုပစ်စညျးထိနျးဌာန
City Planning and Land Admin Department မွို့ပွစီမံကိနျးနှငျ့မွစေီမံခနျ့ခှဲမှုဌာန
Committe Office ကျောမတီရုံး (မွို့တျောခနျးမ)
Coordination Department ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျရေးဌာန
Duty Office တာဝနျမှူးရုံးခနျး
Engineering Department (Building) အငျဂငျြနီယာဌာန(အဆောကျအအုံ)
Engineering Department (Roads and Bridges) အငျဂငျြနီယာဌာန(လမျးတံတား)
Engineering Department (Water & Sanitation) အငျဂငျြနီယာဌာန(ရနှေငျ့သနျ့ရှငျးမှု)
Garden and Playground Parks Department ပနျးဥယြာဉျနှငျ့အားကစားကှငျးမြားဌာန
Health Department ကနျြးမာရေးဌာန
Inspection Department စဈဆေးရေးဌာန
Markets Department ဈေးမြားဌာန
Motor Transport and Workshop Department စကျရုံနှငျ့မျောတျောယာဉျဌာန
Nay Pyi Taw Guest House (1) နပွေညျတျောစညျပငျဧညျ့ရိပျသာ (၁)
Nay Pyi Taw Guest House (2) နပွေညျတျောစညျပငျဧညျ့ရိပျသာ (၂)
Pollution Control and Cleaning Department ပတျဝနျးကငျြထိနျးသိမျးရေးနှငျ့သနျ့ရှငျးရေးဌာန
Production Department ထုတျလုပျရေးဌာန
Public Relations and Information Department ပွညျသူ့ဆကျဆံရေးနှငျ့ပွနျကွားရေးဌာန
Revenue Department အခှနျဌာန
Security and Discipline Department လုံခွုံရေးနှငျ့စညျးကမျးထိနျးသိမျးရေးဌာန
Veterinary and Slaughter House Department တိရိစ်ဆာနျဆေးကုနှငျ့သားသတျရုံမြားဌာန
Nay Pyi Taw Council နပွေညျတျောကောငျစီ
Nay Pyi Taw City Development Committee (Township Administration Offices) နပွေညျတျော စညျပငျသာယာရေး ကျောမတီ (မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူးရုံးမြား)
Pyinmanar Township ပဉျြးမနားမွို့နယျ
Datkhina Thiri Township ဒက်ခိဏသီရိမွို့နယျ
Lewe Township လယျဝေးမွို့နယျ
Ottara Thiri Township ဥတ်တရသီရိမွို့နယျ
Pobba Thiri Township ပုဗ်ဗသီရိမွို့နယျ
Tatkone Township တပျကုနျးမွို့နယျ
Zabu Thiri Township ဇဗ်ဗူသီရိမွို့နယျ
Zeyar Thiri Township ဇယြောသီရိမွို့နယျ
Nay Pyi Taw City Development Committee (Sport Complex, Hospital, Bank, Highway Bus Compound and Markets) နပွေညျတျောစညျပငျသာယာရေးကျောမတီ (အားကစားရုံ၊ ဆေးရုံ၊ ဘဏျ၊ အဝေးပွေးယာဉျရပျနား စခနျး နှငျ့ဈေးမြား) Arharya Thukha Market အာဟာရသုခဈေး Cement Factory (Taung Phi Lar) ဘိလပျမွစေကျရုံ (တောငျဖီလာ) Duty Office တာဝနျမှူးရုံးခနျး Nay Pyi Taw Bawga Thiri Highway Bus Compound နပွေညျတျောဘောဂသီရိအဝေးပွေးယာဉျရပျနားစခနျး Nay Pyi Taw Brick Factory နပွေညျတျောအုတျစကျရုံ Nay Pyi Taw Myoe Ma Market နပွေညျတျောမွို့မဈေး Nay Pyi Taw Sibin Bank Ltd. (Ottara Thiri) နပွေညျတျောစညျပငျဘဏျလီမိတကျ (ဥတ်တရသီရိ) Nay Pyi Taw Sibin Bank Ltd. (Zabu Thiri) နပွေညျတျောစညျပငျဘဏျလီမိတကျ (ဇမ်ဗူသီရိ)
Nay Pyi Taw Thapyay Kone Market	နပွေညျတျောသပွကေုနျးဈေး
Pobba Thiri Market	ပုဗ်ဗသီရိစြေး
Pyinmanar Myoe Ma Market	ပဉျြးမနားမွို့မဈေး
Tatkone Market	တပျကုနျးဈေး
Thiri Yadanar Shopping Complex	သီရိရတနာအဆငျ့မွငျ့ဈေး
Zabu Thiri Hospital	ဇမ်ဗူသီရိဆေးရုံကွီး
Nay Pyi Taw City Development Committe	နပွေညျတျော စညျပငျသာယာရေးကျောမတီ
Average English Word Count in A page and How to count word in MS Excel February 8, 2018
Filed under: English,Translation — hhh123 @ 3:37 pm
Tags: English, Excel, Translation, WordCount
Average Word Count ==> 320
How to count in MS Excel
2) Save it in unicode text format (*.txt).
3) Open it with Word
4) Use the word-count function of word. Et voila!